Dhamma talk Video by Dr. Nandamala Bhivamsa ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူသော ဗီဒီယို တရားတော်များ <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
Dr. Nandamala bhivamsa
International Theravada Buddhist
Missionary University, Yangon
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ
သ၊ စ၊ အ ဓမ္မာစရိယ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊ ဒိုးပင်တောင်၊ (မန္တလေးမှ ၃၃။၂ မိုင်တိုင်)
သာသနာပြုဋ္ဌာန ဓမ္မပညာသင်ကြားရေး ဓမ္မပါမောက္ခ
ရန်ကုန်မြို့၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဘိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံ ပါမောက္ခချုပ်
သီတဂူ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်
စစ်ကိုင်းမြို့၊ မုံရွာမြို့၊ သံလျှင်မြို့၊ မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်များ၏ ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော်
ဆရာတော်ကြီး၏ ထေရုပတ္တိ အကျဉ်း
- (၁၃၀၁) ခုနှစ်၊တပေါင်းလပြည့်၊ (၁၉၄၀)ခုနှစ်၊မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်း၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ရွာ နေ ခမည်းတော် ဦးစံလှ+မယ်တော် ဒေါ်ခင်တို့မှ ဖွားမြင်သည်။
- (၁၃၀၅)ခုနှစ်၊(၁၉၄၄) အသက် ၅နှစ်သားအရွယ် စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ရွာ၊ ပေါ်တော်မှုကျောင်း၊ ဆရာတော်ဦးကေလာသ(ဦးလေး ဘုန်းကြီး)ထံတွင် မြန်မာစာပေနှင့် ဗုဒ္ဓစာပေများကို စတင်သင်ကြားခဲ့သည်။
- (၁၃၁၀)ခုနှစ်၊(၁၉၄၉)၊ဝါဆိုလဆန်း (၁၁)ရက်၊ အသက် (၁၀)နှစ်အရွယ်တွင် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ဝိပဿနာဂန္ဓာရုံ ကျောင်းရှိ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ နဝမမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင် စံကင်းဆရာတော်ကြီးကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုလျက် ရှင်သာမဏေပြုခဲ့သည်။
- (၁၃၁၄)ခုနှစ်၊(၁၉၅၃) အသက်(၁၃)နှစ်တွင် အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲသုံးဆင့် စတင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
- (၁၃၁၇)ခုနှစ်၊ (၁၉၅၆)အသက်(၁၆)နှစ်တွင် အစိုးရဓမ္မာစရိယတန်းကို ဂုဏ်ထူးကျမ်း(၂)ကျမ်းနှင့်အတူအောင်မြင်၍ သာသနဓဇသိရီပဝရဓမ္မာစရိယဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
- (၁၃၁၉)ခုနှစ်၊ (၁၉၅၇) သာသနာလင်္ကာရ သာမဏေကျော်ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
- (၁၃၂၀)ခုနှစ်၊(၁၉၅၈) စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗေရုံတိုက်ကိုနောင်တော်များနှင့်အတူတည်ထောင်ကာ ပဓာန စာချ၊တိုက်ကြပ်အဖြစ် အဆင့်ဆင့်တာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
- (၁၃၂၁)ခုနှစ်၊(၁၉၆၀)ပြည့်နှစ်တွင် နဝမရွှေကျင်သာသနာပိုင် စံကင်းဆရာတော်ဘုရာကြီးကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ရဟန်းဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောင်တော်ရင်းဖြစ်သော ဘဒ္ဒ န္တနာရဒ ထံတွင် သဒ္ဒါ။ သင်္ဂဟဓပိဋက အခြေခံများ၊ ပထမပြန်စာမေးပွဲဆိုင်ရာ ကျမ်းစားများသင်ယူခဲ့ပြီး၊ ဇယမေဓနီ ၊ ဝါဆိုကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ အဂ္ဃိယ (ရွှေကျင်သာသနာပိုင်၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု) ထံဓမ္မာစရိယတန်းဆိုင်ရာ ကျမ်းစားများကို သင်ယူခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံ တိုက်ရှိ နောင်တော်များဖြစ်ကြသည့် နာယက၊ တိုက်အုပ်၊ တိုက်ကြပ်ဆရာတော်များထံတွင် သကျသီဟ၊ စေတိယင်္ဂဏတန်းဆိုင်ရာ ကျမ်းစာများကိုသင်ယူခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ဇမ္ဗူဒီပကျောင်းဆောင်တွင် တိပိဋကပါဠိ+မြန်မာအဘိဓာန်ကျမ်းပြုအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ ဇနကာဘိဝံသထံတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို စတင်သင်ယူခဲ့သည်။
- (၁၃၂၄)ခုနှစ်၊ (၁၉၆၃) ရန်ကုန်စေတိယင်္ဂဏ အဘိဝံသ ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
- (၁၃၂၅)ခုနှစ်၊ (၁၉၆၄) သာသနာဓဇဓမ္မယစရိယ ဝိနယပါဠိပါရဂူဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
- (၁၃၂၅)ခုနှစ်၊ (၁၉၆၄) မန္တလေး သကျသီဟ အဘိဝံသဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
- (၁၃၃၂)ခုနှစ်၊ (၁၉၇၃)မှစတင်၍ ကျမ်းစာများရေးသားပြုစုခဲ့ရာ အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ကျမ်းစာများကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
- (၁၃၃၉)ခုနှစ်၊ (၁၉၈၀) မှအစပြု၍ သာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက်များ-ပထမအကြိမ်သံဃအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်အတွက် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့ (ရွှေကျင်) အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ဓမ္မယစရိယစာမေးပွဲ အကျိုးဆောင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃဝန်ဆောင် (ရွှေကျင်) အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ပထမပြန်စာမေးပွဲပြဋ္ဌာန်းကျမ်းစာ ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိကာယ်စာမေးပွဲစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းရေးဆွဲရေး အဖွဲ့ဝင်၊နိုင်ငံတော်သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့အမှတ်(၁/၉၈) ၏ ဝိနည်းဓိုရ် ၊ပထမပြန်စာမေးပွဲကျင်းပရေး အဖွဲ့(စစ်ကိုင်း)၏ ပုစ္ဆကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ အဖြစ်လည်းကောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
- (၁၃၄၇)ခုနှစ်၊ (၁၉၈၆) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အာသံပြည်နယ်နှင့် အရုဏ ချယ်ပရာဒေ့ရှ်မှ ရဟန်း၊ သာမဏေ၊ ကျောင်းသားငယ်များ အားမြန်မာစာနှင့် အဘိဓမ္မာ တို့ကိုပို့ချပေးခဲ့သည်။
- (၁၃၄၈)ခုနှစ်၊ (၁၉၈၇) သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ဘော်ရဲလာမြို့ Y.M.B.A အသင်းတိုက်တွင် အဘိဓမ္မာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပို့ချပေးခဲ့သည်။
- (၁၃၅၀)ခုနှစ်၊ (၁၉၈၉) သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ University of Kelaniya မှ M.A (Buddhist Studies) ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
- (၁၃၅၅)ခုနှစ်၊ (၁၉၉၄) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊မေရိလင်းပြည်နယ်၊ဘိလ်ဗားစပရင်းမြို့ ၊မင်္ဂလာရာမကျောင်းတိုက်တွင် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အား အဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ကိုပို့ချပေးခဲသည်။
- (၁၃၅၇)ခုနှစ်၊ (၁၉၉၆) နိုင်ငံတော်မှ အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ ဘွဲ့ကိုဆက်ကပ်ခဲ့သည်။ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တွင် ပါမောက္ခအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ Department of Language Studies တွင် English Diploma Class နှင့် B.A တန်းများရှိ ဘာသာရပ်များကို လည်းကောင်း၊ အမေရိက၊ကိုရီးယား၊မက္ကဆီကို၊ဂျာမဏီ၊ပြင်သစ် စသောနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ပါဠိဘာသာ၊အဘိဓမ္မာ ဘာသာရပ်များကို လည်းကောင်းသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။
- (၁၃၅၈)ခုနှစ်၊ (၁၉၉၇) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဘော်လတီမိုးမြို့၊ကေလာသဝိဟရကျောင်းရှိ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အား အဘိဓမ္မ ညသင်တန်းပို့ချပေးခဲ့သည်။
- (၁၃၆၀)ခုနှစ်၊ (၁၉၉၉) ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၏ သြဝါဒစရိယ ဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ် ပြည်တွင်းပြည်ပကျောင်းသားများအား စာပေပို့ချပေးခဲ့သည်။
- (၁၃၆၁)ခုနှစ်၊ (၂၀၀၀) နိုင်ငံတော်မှ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘွဲ့ကိုဆက်ကပ်ခဲ့သည်။
- (၁၃၆၄)ခုနှစ်၊ (၂၀၀၃) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မဂဓတက္ကသိုလ်မှ Ph.D ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှစတင်၍ ဂျာမဏီ၊ နယ်သာလန်၊သြစတြီးယား၊အင်္ဂလန်၊ စင်္ကာပူ၊မလေးရှား၊ကိုးရီးယား နိုင်ငံများသို့ နှစ်စဉ်မပျက်ကြွရောက်၍ အဆိုပါနိုင်ငံသားများအား အဘိဓမ္မာသင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချပေလျက်ရှိသည်။
- (၁၃၆၇)ခုနှစ်၊ (၂၀၀၆) ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။
- (၁၃၈၁)ခုနှစ်၊ (၂၀၂၀) နိုင်ငံတော်မှ အဘိဓဇ မဟာရဋ္ဌဂုရု ဘွဲ့ကိုဆက်ကပ်ခဲ့သည်။
- ယခုအခါ ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ သည်စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံစာသင်တိုက် ၏ပဓာနနာယကဆရာတော် တာဝန်၊ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တွင် ပါမောက္ခချုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရင်း Diploma သင်တန်းများနှင့် B.A ပ၊ဒု၊တတိယ နှစ်များတွင် စာပေပို့ချပေးတော်မူခြင်း၊ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ်၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဘိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံ ပါမောက္ခချုပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း လူသားများအကျိုးအတွက် တရားဓမ္မများဟောပြောခြင်းဖြင့် သာသနာပြုလျက်ရှိသည်။
II. ဆရာတော်ကြီး၏ ဓမ္မသင်တန်းများ
III. ဆရာတော်ကြီး၏ တရား ဗွီဒီယိုခွေများ
Facebook ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဓမ္မသဘင် LIVE မှ ပြန်လည် တင်ပြသော တရားတော်များ
(Facebook မှပြန်လည် တင်ပြခြင်းဖြစ်၍ တစ်ခါတစ်ရံ အပြတ်အတောက်များရှိပါသည်။ recording copy ရသည်နှင့် ဗွီဒီယို page တွင်တင်ပြပေးပါမည်။)
၁၁-၀၂-၂၀၂၀ - ဆရာကောင်းရှိမှ နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သည်
၁၀-၀၂-၂၀၂၀ - သာသနာ‌ရေးရာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မိန့်မှာချက်များ
၀၉-၀၂-၂၀၂၀ - စိတ်စွဲလမ်းမှုကိုအောင်နိုင်သူ
၀၇-၀၂-၂၀၂၀ - ဓမ္မဦးဆောင်သည့် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအ‌ကြောင်း
၀၆-၂၀-၂၀၂၀ - မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ကျောင်းအလှူရှင်များ
၀၅-၀၂-၂၀၂၀ - ပါပနှင့်ကလျာဏ
၀၅-၀၂-၂၀၂၀ - နေ့လည်ခင်း ဩဝါဒတရားတော် (သစ္စာနန္ဒ ဓမ္မစင်တာ မဟာသတိပဌာန်ဝိပဿနာ အလုပ်ပေး (၇)စခန်း)
၀၄-၀၂-၂၀၂၀ - သံသရာစီးပွား ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ
၀၃-၀၂-၂၀၂၀ - လူသားတို့အတွက်မြတ်နိုးဖွယ်အကောင်းဆုံးရတနာ
၀၂-၀၂-၂၀၂၀ - မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်သာလွန်မင်းတရားအကြောင်း
၃၀-၀၁-၂၀၂၀ - မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ပုဂံဒေသ
၂၉-၀၁-၂၀၂၀ - လိုချင်တာရရှိရေး အကြောင်းတရားကိုမျှော်တွေးခြင်း
၂၈-၀၁-၂၀၂၀ - အခွင့်သာခိုက် လုံ့လစိုက် တရားတော်
၂၇-၀၁-၂၀၂၀ - မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ် ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူ ပုဂ္ဂိုလ် ဆယ်ဦးအကြောင်း
၂၆-၀၁-၂၀၂၀ - တရားမျှတမှုတရားတော်
၂၆-၀၁-၂၀၂၀ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၂၅-၀၁-၂၀၂၀ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၁၉-၀၁-၂၀၂၀ - အနုမောဒနာတရားတော်
၁၈-၀၁-၂၀၂၀ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၁၄-၀၁-၂၀၂၀ - သံသရာအတွင်းမှ အမှားအယွင်းများ တရားတော်
၁၃-၀၁-၂၀၂၀ - သံသရာဆုတောင်းအကောင်းချည်းမရ တရားတော်
၁၂-၀၁-၂၀၂၀ - လူတိုင်းအတွက်အမှန်တရား
၁၁-၀၁-၂၀၂၀ - ဝိသာခါ၏အဘိုးအဘွားများနှင့် သူတို့၏အစွမ်းတန်ခိုးများ
၁၀-၀၁-၂၀၂၀ - ကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ
၀၈-၀၁-၂၀၂၀ - ဝိသာခါနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ
၀၈-၀၁-၂၀၂၀ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၀၇-၀၁-၂၀၂၀ - စွမ်းအားပညာမြှင့်တင်ပါ
၀၇-၀၁-၂၀၂၀ - စူဠဟတ္ထိပဒေါပမသုတ် စာဝါပို့ချခြင်း (သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် )
၀၆-၀၁-၂၀၂၀ - ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်း တရားတော်
၀၆-၀၁-၂၀၂၀ - စူဠဟတ္ထိပဒေါပမသုတ် စာဝါပို့ချခြင်း (သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် )
၀၅-၀၁-၂၀၂၀ - ဘုရားအစစ်တွေ့ရန် ခြေရာခံခြင်း တရားတော်
၀၄-၀၁-၂၀၂၀ - ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၅)
၀၄-၀၁-၂၀၂၀ - နုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၀၃-၀၁-၂၀၂၀ - ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၄)
၂၀-၀၁-၂၀၂၀ - မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမသြဝါဒတရား(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်)
၀၁-၀၁-၂၀၂၀ - ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၃)
၀၁-၀၁-၂၀၂၀ - သတိသမ္ပဇည တရားတော်
၀၁-၀၁-၂၀၂၀ - နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူး ဩဝါဒ ကထာ
၃၁-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၆၂)
၃၀-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၆၁)
၂၉-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၆၀)
၂၉-၁၂-၂၀၁၉ - မြတ်ဗုဒ္ဓကို အမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်း
၂၈-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၉)
၂၇-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၈)
၂၆-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၇)
၂၅.၁၂.၂၀၁၉ - ရှင်ပြုနားသအလှူတော်နှင့် အနုမောဒနာတရားတော်
၂၅.၁၂.၂၀၁၉ - ကထိန်အလှူတော် ရေစက်ချ အနမောဒနာတရားတော်
၂၃.၁၂.၂၀၁၉ - ရှင်ပြုပွဲ၏ အနှစ်သာရ
၂၂-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၆)
၂၁-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၅)
၂၀-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၄)
၁၉-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၃)
၁၈-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၂)
၀၉-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၁)
၀၈-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၀)
၀၇-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၉)
၀၆-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၈)
၀၅-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၇)
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ - ကိုယ်ချင်းစာတရားနှင့်ကိုယ်ကျင့်သီလ တရားတော်
၀၂-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၆)
၀၁-၁၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၅)
၀၁-၁၂-၂၀၁၉ - သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်း စာဝါပို့ချခြင်း
၃၀-၁၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၄)
၃၀-၁၁-၂၀၁၉ - သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်း စာဝါပို့ချခြင်း
၂၉-၁၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၃)
၂၉-၁၁-၂၀၁၉ - သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်း စာဝါပို့ချခြင်း
၂၈-၁၁-၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၂)
၂၇-၁၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၁)
၂၅-၁၁-၂၀၁၉ - အရှင်မဟာကဿပမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ တရားတော် အပိုင်း (၃)
၂၅-၁၁-၂၀၁၉ - အနုမောဒနာတရားတော်
၂၃-၁၁-၂၀၁၉ - ရှင်မဟာကဿပမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ အပိုင်း(၂)
၂၁-၁၁-၂၀၁၉ - ရှင်မဟာကဿပမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ အပိုင်း(၁)
၂၀-၁၁-၂၀၁၉ - အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၆) တရားတော်
၁၉-၁၁-၂၀၁၉ - လူတိုင်းအတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမစကားများ
၁၄-၁၁-၂၀၁၉ - အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၅) တရားတော်
၁၁-၁၁-၂၀၁၉ - ဝဇိတာနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုက် ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား
၀၉-၁၁-၂၀၁၉ - အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၄) တရားတော်
၀၈-၁၁-၂၀၁၉ - အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၃) တရားတော်
၀၆-၁၁-၂၀၁၉ - အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၂) တရားတော်
၀၄-၁၁-၂၀၁၉ - ကထိန်အလှူတော် တရားတော်
၃၀-၁၀-၂၀၁၉ - ကောင်းမှုတိုးပွား ထာဝရကုသိုလ်များ တရားတော်
၂၉-၁၀-၂၀၁၉ - ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားနှင့် ဝိပဿနာရှုပွားခြင်း တရားတော်
၂၇-၁၀-၂၀၁၉ - အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၁)တရားတော်
၂၅-၁၀-၂၀၁၉ - အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား အပိုင်း (၅) တရားတော်
၂၄-၁၀-၂၀၁၉ - အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား အပိုင်း (၄) တရားတော်
၂၀-၁၀-၂၀၁၉ - အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား (၃) တရားတော်
၁၉-၁၀-၀၁၉ - အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား (၂) တရားတော်
၁၈-၁၀-၂၀၁၉ - အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား အပိုင်း(၁) တရားတော်
၁၇-၁၀-၂၀၁၉ - ပါရာပရိယမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ တရားတော်
၁၆-၁၀-၂၀၁၉ - အနုရုဒ္ဓါမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၂) တရားတော်
၁၆-၁၀-၂၀၁၉ - အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၅-၁၀-၂၀၁၉ - အနုရုဒ္ဓါမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၁) တရားတော်
၁၅-၁၀-၂၀၁၉ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၁၃-၁၀-၂၀၁၉ - အဘိဓမ္မာနေ့မြတ်အခါ တရားတော် (သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့)
၁၁-၁၀-၀၁၉ - အင်္ဂုလိမာလမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၁)
၁၂-၁၀-၂၀၁၉ - အင်္ဂုလိမာလမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၂)
၁၀-၁၀-၂၀၁၉ - ဘဒ္ဒိယမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား
o၉-၁၀-၂၀၁၉ - အရှင်ဥပါလိနှင့်ဝိနယသာသနာ
o၈-၁၀-၂၀၁၉ - သေလ မထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား တရားတော်
o၇-၁၀-၂၀၁၉ - မာလုကျပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား
o၇-၁၀-၂၀၁၉ - သြဝါဒကထာ တရားတော်
၂၉.၀၉.၂၀၁၉ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော် (သကျဓိတာ ဗုဒ္ဓကောလိပ် သီလရှင်စာသင်တိုက်)
၂၇-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၈)
၂၆-၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၇)
၂၅-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၆)
၂၄-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၅)
၂၄-၀၉-၂၀၁၉ - သြဝါဒကထာ တရားတော်
၂၃-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၄)
၂၂-၀၉-၂၀၁၉ - ရှင်ရဋ္ဌပါလမထေရ်မြတ် ဟောကြားအပ်သောတရား (အပိုင်း-၂ )
၂၁-၀၉-၂၀၁၉ - ရှင်ရဋ္ဌပါလမထေရ်မြတ် ဟောကြားအပ်သောတရား (အပိုင်း-၁ )
၂၁-၀၉-၂၀၁၉ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၂၀-၀၉-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၆၅)
၁၉-၀၉-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၆၄)
၁၇-၀၉-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၆၂)
၁၆-၀၉-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၆၁)
၁၆-၀၉-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၆၀)
၁၅.၀၉.၂၀၁၉ - အနုမောဒနာ သြဝါဒတရားတော် (ပြင်ဦးလွင်)
၁၄-၀၉-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၉)
၁၁-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၁၁-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၁၀-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၁၀-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၉-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၉-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ - မလွန်စျေး ဆန်လှူအသင်းကြီး၏ ၁၂၃ နှစ်မြောက် မဟာဒဏ္ဍုလဒါန ရေစက်ချ အနုမောဒနာတရားတော် (မန္တလေး)
၀၈.၀၉.၂၀၁၉ - ယင်ကောင်နှင့်တူသော စိတ် တရားတော် (ချမ်းသာကြီးဘုရား ရွှေဘိုမြို့)
၀၈.၀၉.၂၀၁၉ - တေမိယဇာတ်တော်လာ မိတ္တပူဇာ တရားတော် (မန္တလေး)
၀၈-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၈-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၇-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၇-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၆-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၆-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၅-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၅-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၄-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၄-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၃-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၃-၀၉-၂၀၁၉ - ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၂-၀၉-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၈)
၀၁-၀၉-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၇)
၀၁-၀၉-၂၀၁၉ - မွေးနေ့မင်္ဂလာတရားတော်
၃၁-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၆)
၃၀-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၅)
၂၉-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၄)
၂၇-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၃)
၂၆-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၂)
၂၅-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၁)
၂၄-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၀)
၂၃-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၄၉)
၂၂-၀၈-၂၀၁၉ - သြဝါဒကထာတရားတော်
၂၁-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၄၈)
၁၆-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၄၇)
၁၅-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၄၆)
၁၄-၀၈-၂၀၁၉ - သြဝါဒကထာတရားတော်
၁၂-၀၈-၂၀၁၉ - မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၄၅)
၁၁-၀၈-၂၀၁၉ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၀၉-၀၈-၂၀၁၉ - မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၆)
၀၈-၀၈-၂၀၁၉ - စကားနှင့်နားထောင်သူ
၀၇-၀၈-၂၀၁၉ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၀၅-၀၈-၂၀၁၉ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၁-၇-၂၀၁၉ - မြင့်မြတ်သူအကြောင်း တရားတော်
၁-၇-၂၀၁၉ - ၀ါဆိုအလှူ အနုမောဒနသြဝါဒ တရားတော် (နိုဗိုတယ် ဟိုတယ်)
၂၁-၆-၂၀၁၉ - မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၅)
၁၉-၆-၂၀၁၉ - အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော် )
၁၈-၆-၂၀၁၉ - အတ္တသမ္မာ ပဏီဓိ တရားတော်
၁၇-၆-၂၀၁၉ - (၆၅)ကြိမ်မြောက် မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်နေ့ သြဝါဒတရားတော်
၀၆-၅-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၅-၅-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ တရားတော်
၁၆-၅-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ
၁၈-၅-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၇-၄-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၂-၄-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၂-၄-၂၀၁၉ စိတ်ကိုအောင်နိုင်သူ တရားတော်
၁၃-၄-၂၀၁၉ သင်ကြန်အကြိုနေ့ သီလပေး ဩဝါဒ တရားတော်
၁၉-၄-၂၀၁၉ ဘဒ္ဒကမ္ဘာမှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကျောင်းဒါယကာများ တရားတော်
၂၁-၄-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁-၂-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၃-၂-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၄-၂-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၅-၂-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၅-၂-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄၂) တရားတော်
၆-၂-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၉-၂-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄၄) တရားတော်
၂၂-၃-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
27-3-2019 English Proficiency Course completion Ceremony
၂-၁-၂၀၁၉ သတိသမ္ပဇဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့် ရင်ထဲမှအမုန်းတရား ဖယ်ရှားခြင်းတရားတော် (နှစ်သစ်ကူး၊ပြည်သူ့ရင်ပြင်၊အထူးဓမ္မသဘင်)
၅-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၆-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၇-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂၇) တရားတော်
၈-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၀-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၀-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂၉) တရားတော်
၁၁-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၀) တရားတော်
၁၃-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၂) တရားတော်
၁၈-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၉-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၉-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၅) တရားတော်
၂၀-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၂၀-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၆) တရားတော်
၂၁-၁-၂၀၁၉ သုတနှင့်ပညာ တရားတော်
၂၅-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၂၆-၁-၂၀၁၉ တိုးတက်ကြီးပွား အကြောင်းတရားများ တရားတော်
၂၇-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၇) တရားတော်
၂၈-၁-၂၀၁၉ ကြီးပွားခြင်းနှင့်ဆုတ်ယုတ်ခြင်း တရားတော်
၂၈-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၈) တရားတော်
၂၉-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၉) တရားတော်
၃၀-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄၀) တရားတော်
၃၁-၁-၂၀၁၉ မြင့်မြတ်သောစိတ်ထား တရားတော်
၁၃-၄-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁)
၁၄-၄-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၂)
၁၅-၄-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၃)
၁၆-၄-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၄)
၁၇-၄-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၅)
၁၈-၄-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၆)
၂၀-၄-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၇)
၁၇-၅-၂၀၁၉ မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၈)
၁၈-၅-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၉)
၁၉-၅-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၀)
၂၀-၅-၂၀၁၉ မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၁)
၂၁-၅-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၂)
၂၅-၅-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၃)
၂၆-၅-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၄)
၂၁-၆-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၅)
၀၉-၈-၂၀၁၉ မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၆)
၀၄-၀၁-၂၀၂၀ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၅)
၀၃-၀၁-၂၀၂၀ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၄)
၀၁-၀၁-၂၀၂၀ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၃)
၂၈-၁၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၂)
၂၄-၁၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၀)
၀၆-၁၀-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၉)
၀၃-၀၂-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၃)
၂၅-၀၁-၂၁၀၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၂)
၂၄-၀၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၁)
၂၃-၀၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၀)
၂၂-၀၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၉)
၂၁-၀၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၈)
၁၈-၀၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၇)
၀၁-၀၁-၂၀၁၉ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၆)
၃၀-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၅)
၂၉-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၄)
၂၈-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၃)
၂၇-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၂)
၂၆-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၁)
၂၅-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၀)
၂၄-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၉)
၂၃-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၈)
၂၂-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၇)
၂၀-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၆)
၁၉-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၅)
၁၈-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၄)
၁၇-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၃)
၁၆-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၂)
၁၄-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၁)
၁၃-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၀)
၁၂-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၉)
၁၁-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၈)
၁၀-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၇)
၀၉-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၆)
၀၈-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၅)
၀၇-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၄)
၀၆-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃)
၀၅-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂)
၀၄-၁၂-၂၀၁၈ - ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁)
မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ
(Facebook Live မှ တရားများဖြစ်သဖြင့် တချို့ အပိုင်းများသည် internet connection ကြောင့်အကုန်မပါတာရှိတက်ပါသည်)
၂၂-၀၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁)
၂၃-၀၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂)
၂၄-၀၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃)
၂၅-၀၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄)
၂၉-၀၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆)
၃၁-၀၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈)
၀၁-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉)
၀၈-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀)
၀၉-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၁)
၁၀-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂)
၁၁-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃)
၁၂-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄)
၁၃-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၅)
၁၄-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၆)
၁၅-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၇)
၁၆-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၈)
၁၇-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၉)
၁၉-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၀)
၂၀-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၁)
၂၁-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၂)
၂၂-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၃)
၂၃-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၄)
၂၄-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၅)
၂၅-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၆)
၂၆-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၇)
၂၇-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၈)
၂၈-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၉)
၂၉-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၀)
၃၀-၀၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၁)
၀၃-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၂)
၀၄-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၃)
၀၅-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၄)
၁၀-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၈)
၁၃-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၉)
၂၁-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၀)
၂၄-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၁)
၂၅-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၂)
၂၆-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၃)
၂၇-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၄)
၂၈-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၅)
၂၉-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၆)
၃၁-၁၀-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၈)
၀၄-၁၁-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၉)
၀၈-၁၁-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၀)
၁၈-၁၁-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၃)
၁၁-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၄)
၁၂-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၅)
၁၃-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၆)
၁၄-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၇)
၁၅-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၈)
၁၆-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၉)
၁၈-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၀)
၁၈-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၁)
၂၀-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၂)
၂၁-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၃)
၂၂-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၄)
၂၃-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၅)
၂၄-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၆)
၂၆-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၇)
၂၇-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၈)
၂၈-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၉)
၃၁-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၀)
၀၂-၀၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၁)
၁၇-၀၃-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၂)
၃၁-၀၃-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း (၇၃)
၂၃-၀၄-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း (၇၄)
၂၅-၀၄-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း (၇၅)
၀၇-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၆)
၀၈-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၇)
၀၉-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၈)
၁၀-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၉)
၁၁-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၀)
၁၂-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၁)
၁၃-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၂)
၁၄-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၃)
၁၅-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၄)
၂၄-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၆)
၂၅-၀၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၇)
၀၇-၀၇-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၈)
၁၄-၀၇-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၀)
၂၃-၀၈-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၁)
၂၄-၀၈-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၂)
၂၅-၀၈-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၃)
၂၈-၀၈-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၄)
၀၁-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၅)
၀၂-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၆)
၀၄-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၇)
၀၅-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၉)
၀၇-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၀)
၀၉-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၁)
၁၂-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း (၁၀၂)
၁၅-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၃)
၁၆-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၄)
၂၀-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၇)
၂၁-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၈)
၁၃-၁၀-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၉)
၂၀-၁၀-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၁၀)
၂၁-၁၀-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၁၁)
၂၂-၁၀-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း (၁၁၂)
၆-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း (၁၁၃)
၁၁-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၁၄)
၁၂-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၁၅)
၁၃-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၁၆)
၁၅-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၁၇)
၁၇-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၁၈)
၂၃-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၁၉)
၂၄-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂ဝ)
၂၅-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂၁)
၂၆-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂၂)
၂၇-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂၃)
၂၇-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂၄)
၂၇-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂၆)
၀၇-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂၇)
၁၀-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂၉)
၁၁-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၀)
၁၂-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၁)
၁၃-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၂)
၁၆-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၄)
၁၉-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၅)
၂၀-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၆)
၂၇-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၇)
၂၈-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၈)
၂၉-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၉)
၃၀-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄၀)
၃၀-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄၁)
၀၅-၀၂-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄၂)
၃၀-၀၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄၃)
၀၉-၀၂-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄၄)
ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ အထူးဓမ္မသဘင်ဝယ် ဟောကြားတော်မူသော
၆-၉-၂၀၁၆ (ည) - ဓမ္မခေါင်းဆောင်၏လေးစားထိုက်သောအရည်အချင်းများ အကြောင်း
၈-၉-၂၀၁၆ (ည) - ကံတရားနှင့်သံသရာဘဝများ အကြောင်း တရားဒေသနာတော်
၉-၉-၂၀၁၆ (ည) - ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှုမြင်၍ မိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်ခြင်း တရားဒေသနာတော်
၁၂-၉-၂၀၁၆ (ည) - ကီဋာဂီရိသုတ်အနှစ်ချုပ် တရားဒေသနာတော် (၁)
၁၂-၉-၂၀၁၆ (ည) - ကီဋာဂီရိသုတ်အနှစ်ချုပ် တရားဒေသနာတော် (၂)
၁၆-၉-၂၀၁၆ (ည) - ဘဝခရီးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း အကြောင်း တရားတော်
၁၈-၉-၂၀၁၆ (ည) - ထာဝရလွှင့်ထူရမည့် သာသနာ့အောင်လံတော်တရားတော်
ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ (သုဗောဓာရုံ.တိုက်ခွဲ.၃) တိုက်အုပ်ဆရာတော် အရှင်ကုသလ ၏ ဓမ္မာစရိယဂုဏပူဇာ အောင်ပွဲ အထူးဓမ္မသဘင်
အရှင်ကုသလနှင့် ခမည်းတော်မယ်တော်များ၊ မန္တလေးမြို့ ပုညကာရီညီအမများ၏ ဓမ္မဒါန
မဟာဒုဂ်မြသပိတ်စာရေးတံမဲပွဲတော် အောင်ပွဲအခမ်းအနားဝယ် ဟောကြားတော်မူသော
၂၂-၉-၂၀၁၆ (ည) - စေတနာကောင်းလျှင် ကံကောင်းသည် တရားတော်(၁)
၂၂-၉-၂၀၁၆ (ည) - စေတနာကောင်းလျှင် ကံကောင်းသည် တရားတော်(၂)
၂၄-၉-၂၀၁၆ (ည) - အပဏ္ဏကသုတ်မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမစကား အပိုင်း(၁)
၂၅-၉-၂၀၁၆ (ည) - အပဏ္ဏကသုတ်မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမစကား အပိုင်း(၂)
၂၆-၉-၂၀၁၆ (ည) - အပဏ္ဏကသုတ်မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမစကား အပိုင်း(၃)
၂၇-၉-၂၀၁၆ (ည) - ဥပါလိသုတ်မှ ဗုဒ္ဓနှင့် နိဂဏ္ဍတို့၏ မတူညီသောကမ္မဝါဒများ အပိုင်း(၁)
၂၈-၉-၂၀၁၆ (ည) - ဥပါလိသုတ်မှ ဗုဒ္ဓနှင့် နိဂဏ္ဍတို့၏ မတူညီသောကမ္မဝါဒများ အပိုင်း(၂)
၂၉-၉-၂၀၁၆ (ည) - ဥပါလိသုတ်မှ ဗုဒ္ဓနှင့် နိဂဏ္ဍတို့၏ မတူညီသောကမ္မဝါဒများ အပိုင်း(၃)
သီပေါမြို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး အထူးဓမ္မသဘင်ဝယ်ဟောကြားတော်မူသော
၁-၁၀-၂၀၁၆ (ည) သံသရာခရီးသွားနှင့် ကံတရား တရားတော်
၂-၁၀-၂၀၁၆ (ည) ကံကိုဖယ်ရှား နိဗ္ဗာန်သွား တရားတော်
ကျောက်မဲမြို့ မြို့ကျက်သရေဆောင်ခန်းမ အထူးဓမ္မသဘင်ဝယ် ဟောကြားတော်မူသော
၃-၁၀-၂၀၁၆ (ည) - အာဒိတ္တသုတ်လာ ဗုဒ္ဓဟောကြား ဝိပဿနာတရား တရားတော်
၄-၁၀-၂၀၁၆ - နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာသြဝါဒ - ကျောက်မဲမြို့ အမှတ်(၁) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်၊ တပ် မိသားစု
၄-၁၀-၂၀၁၆ ည ချမ်းသာအတုကိုစွန့်မှ ချမ်းသာအစစ်ကိုရမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တွင် ဟောကြားတော်မူသော
၁-၇-၂၀၁၆ - မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ
၇-၁၀-၂၀၁၆ - ယာနဒါနမော်တော်ယာဉ်အလှူရေစက်ချ
ဘိုးဘွားမိဘများအားရည်စူး၍ မိုးကုတ်မြို့. မမိုးမိုးဦး၊ ကိုမောင်သင် + မမေနွယ်ဦး၊ မန္တလေးမြို့ ကိုစိုးဝင်း+မဇင်မာဦး၊ မိုးကုတ်မြို့ ကိုချမ်းမြေ့ဦး၊ ကိုလတ် + မဟေမာဦး မိသားစုတို့မှ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာအတွက် ကျောင်းသုံး LIGHT TRUCK မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကို လှူဒါန်းပါသည်
၈-၁၀-၂၀၁၆ ည၊ ပိုင်ရှင်မဲ့ ပစ္စည်းများ အကြောင်း တရားဒေသနာတော်
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းဝင် ကျောင်းပေါင်း ၂၇.ကျောင်း၊ ရဟန်းတော် ၂၉၉.ပါး ရှင်သာမဏေ ၂၈၃.ပါး၊ သီလရှင် ၁၄၀ မှ
၈-၁၀-၂၀၁၆ ပြင်ဦးလွင်မြို့၏ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းဝင် မထေရ်ကြီးများအား ဝါကျွတ်ကန်တော့ပွဲ အခန်းအနား
၉-၁၀-၂၀၁၆ နံနက်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် သတ္တဗေဒဌာန၏ ဝါတွင်းဥပုသ်ပွဲ၊ နံနက်ခင်းသြဝါဒအနုမောဒနာ
မန္တလေးမြို့ ဓနသိဒ္ဓိအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရား ၂.နှစ်ပြည့် ဓမ္မသဘင်ဝယ်
၉-၁၀-၂၀၁၆ ည၊ ကံကိုဖယ်ရှားကျင့်စဉ်များအကြောင်း တရားဒေသနာတော်
ကျောက်ဆည်မြို့ မိုးကြိုးကုန်းရွာ ဓမ္မရံသီဓမ္မာရုံရေစက်ချဓမ္မသဘင်
၁၀-၁၀-၂၀၁၆ အလှူဒါန မြတ်ပုည တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ရွာသစ်ကြီးစံပြကျေးရွာ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် ဆရာ-ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား-ကျောင်းသူများနှင့် ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏
၁၁-၁၀-၂၀၁၆ နံနက် ဝါဆိုသင်္ဃန်းကပ် အလှူအနုမောဒနာသြဝါဒတရား
ဦးတင်မောင်မြင့် နှင့် သား.ကိုတင်မောင်လတ် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်သန်းမြ ``မိုးပုလဲကြော်ငြာတံဆိပ်ရိုက် မိသားစု မန္တလေး၊ ဘုရားသုံးဆူဘုရားဝင်းအတွင်း၊ ၈၂. ၂၉/၃၀ ကြား
၁၁-၁၀-၂၀၁၆ လူ့ဘဝ၏ မဟာအခွင့်အရေးအကြောင်း တရားဒေသနာတော်
ရွှေဟင်္သာကျောင်းတိုက်၊ နန်းမြိုင်လမ်း၊ ပြင်ဦးလွင်
၁၄-၁၀-၂၀၁၆ ဗုဒ္ဓသင်ကြား ဓမ္မအမေးအဖြေများအကြောင်း တရားဒေသနာတော်
သစ္စာနန္ဒ ဓမ္မစင်တာ ၊ ယက္ကန်းစင်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် စဉ့်ကူးမြို့ နယ် အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းဝင်းအတွင်း ရှိ ရွှေရတုခန်းမဆောင်အတွင်း၌ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော အထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား။
၁၇-၁၀-၂၀၁၆ သြဃတရဏသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်
အာယုပါလကအသင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့ အ.ထ.ကကျောင်းဝင်းအတွင်း ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးဟောကြားအပ်သော
၁၈-၁၀-၂၀၁၆ မိမိကိုယ်တိုင် မိမိ၏ရန်သူမဖြစ်ပါစေနှင့် အကြောင်း တရားဒေသနာတော်
(join2broken session)
၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား အနုမောဒနာ တရားတော်
ရန်တိုင်းဒေသကြီး ကမ္ဘာအေး တိပိဋကမဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား။၁၃၇၈-ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၄)ရက်နေ့ ၊
၂၀-၁၀-၂၀၁၆ မာဃသုတ် အနှစ်ချုပ် တရားဒေသနာတော်
ရန်တိုင်းဒေသကြီး ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော် အတွင်း၌ ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား။၁၃၇၈-ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၅)ရက်နေ့ ၊
၂၁-၁၀-၂၀၁၆ သလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ် တရားဒေသနာတော်
မန္တလေးမြို့ မဟာသကျသီဟ(၁၃၁)နှစ်ပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိပွဲတော်အောင်ပွဲ၊ မဟာသကျသီဟဘုရားဝင်း၊ မန္တလေး
၂၂-၁၀-၂၀၁၆ သစေတနသုတ် အနှစ်ချုပ် တရားတော်
မန္တလေးမြို့ ဓမ္မဒီပလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာသင်တန်း သတ္တမအကြိမ်စာအောင်ပွဲအကြို သြဝါဒခံယူပွဲ၊ ဓမ္မဓရဘာသန္တရကောလိပ်ဝင်း၊ မန္တလေးမြိ့ု
(၈၉)ကြိမ်မြောက် ဝိပဿနာဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲ အထူးဓမ္မသဘင်၊ ဝိပဿနာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး
၂၃-၁၀-၂၀၁၆ သင်္ဂါရဝသုတ် အနှစ်ချုပ် တရားတော်
မင်္ဂလာမန္တလေးမိသားစု၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ဓမ္မသဘင်၊ မင်္ဂလာမန္တလေး၊ သဇင်လမ်းနှင့်ငုရွှေဝါလမ်းကြား
၂၅-၁၀-၂၀၁၆ မင်္ဂလာမန္တလေးနှင့် မင်္ဂလာအတွေး တရားတော်
ဒါနသူရဇ္ဇဆွမ်းလောင်းအသင်း ၁၀.နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဓမ္မသဘင်။ ဘုရားနီဆုတောင်းပြည့်ဘုရားဝင်း၊ မန္တလေးမြို့။
၂၆-၁၀-၂၀၁၆ ဘဝကိုနှစ်သက်ခြင်းသည် ဒုက္ခကိုနှစ်သက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည် အကြောင်းတရားတော်
၂၇-၁၀-၂၀၁၆ ကံထပ်ခြင်းနှင့် တနေ့တာဆွမ်းကပ်ခြင်း အလှူတော်မင်္ဂလာ
မဟာမြကျွန်းသာပညာရေးမိသားစု၏ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်အား ကံထပ်ခြင်းနှင့် ဓမ္မသဟာယသာနစင်တာအတွက် Xiluh ကားလှူဒါန်းခြင်း ရေစက်ချအထိမ်းအမှတ် ဓမ္မသဘင်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ၊ ဓမ္မရတိ မဟာဓမ္မသဘာဓမ္မာရုံ
၂၇-၁၀-၂၀၁၆ ဉာတပရိညာ ဝိပဿနာ တရားတော် (join2broken session)
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် သက်တော် (၆၀)အရွယ်တော်က အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဂုဏပူဇာမှတ်တမ်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ၊ ဓမ္မရတိ မဟာဓမ္မသဘာဓမ္မာရုံအတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ ၁၃၇၈-ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၁၂)ရက်၊
၂၈-၁၀-၂၀၁၆ တီရဏပရိညာ ဝိပဿနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ၊ ဓမ္မရတိ မဟာဓမ္မသဘာဓမ္မာရုံအတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ ၁၃၇၈-ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၁၃)ရက်၊
၂၉-၁၀-၂၀၁၆ ပဟာန ပရိညာ ဝိပဿနာအကြောင်း တရားဒေသနာတော် (join2broken session)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ၊ ဓမ္မရတိ မဟာဓမ္မသဘာဓမ္မာရုံအတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ ၁၃၇၈-ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁)ရက်၊
၃၁-၁၀-၂၀၁၆ လူ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးသည့် လူတို့၏ စရိုက်ဆိုးများအကြောင်း တရားဒေသနာတော်
ပြင်ဦးလွင်မြို့ အောင်ချမ်းသာရွာ၊ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ မဟာကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား
၃၁-၁၀-၂၀၁၆ စစ်ကိုင်း မဟာသုဗောဓာရုံ နာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇနိန္ဒ မှ အနုမောဒနာတရား ချီးမြှင့်တော်မူပါသည်။
၃၁-၁၀-၂၀၁၆ လူ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးသည့် လူတို့၏စရိုက်ဆိုးများ အကြောင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ရွှေဒါးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ ၁၇.လမ်း၊ ၈၈/၈၉ ကြား၊ မန္တလေးမြို့။ မဟာကလျာဏသီတလ ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီး၊ ဓမ္မဒီပကျောင်းဆောင်အတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသာနာတော်နှစ် ၂၅၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၂)ရက်၊
၁-၁၁-၂၀၁၆ သုခပတ္ထနာသုတ် အနှစ်ချုပ် တရားဒေသနာတော် (join2broken session)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ၃၆၃၇လမ်းနှင့်၈၇၈၈လမ်းကြား၊
မစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်းအတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသာနာတော်နှစ် (၂၅၆၀) ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၈) ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၃)ရက်၊
၂-၁၁-၂၀၁၆ ကောသမ္ဗီသုတ်လာ မထေရ်မြတ်တို့၏ ဓမ္မသာကစ္ဆာ တရားဒေသနာတော်
၂-၁၁-၂၀၁၆ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံ ကထိန်အလှူတော် အနုမောဒနာတရား
၄-၁၁-၂၀၁၆ မေတ္တာဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖေါ်ဆောင်ခြင်း တရားတော်
၅-၁၁-၂၀၁၆ မေတ္တာကို သမထအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခြင်း တရားတော်
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံမြို့ ကောင်းမှူးခမ်းကျောင်းတိုက် ဓမ္မဿဝန ဓမ္မာရုံအတွင်း။
၆-၁၁-၂၀၁၆ မေတ္တာ အခြေခံ ဝိပဿနာဉာဏ် တရားတော်
၈-၁၁-၂၀၁၆ ဗလငါးပါး စိတ်စွမ်းအား တရားတော်
၉-၁၁-၂၀၁၆ ကျေနပ်စရာ လူ့ဘဝ အကြောင်း တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ တံတားလေးလမ်းဝ၊ ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော် အတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသနာတော်နှစ် (၂၅၆၀) ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၈) ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁၂)ရက်၊
၁၁-၁၁-၂၀၁၆ တရားနဲ့ဝေးလျှင် ဘုရားနဲ့ ဝေးမည် အကြောင်းတရားဒေသနာတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ တံတားလေးလမ်းဝ၊ ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်၊ အတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသာနာတော်နှစ် (၂၅၆၀) ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၈) ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၁)ရက်၊
၁၅-၁၁-၂၀၁၆ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် ကိုက်ညီသော လူနေမှု ဘဝ အကြောင်း တရားဒေသနာတော်
စစ်ကိုင်းမြို့၊ မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ မဟာသမယဓမ္မာရုံအတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသာနာတော်နှစ် (၂၅၆၀) ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၈) ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၈)ရက်၊
၂၂-၁၁-၂၀၁၆ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင် ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၁၄)တရားဒေသနာတော်
(join3broken session)
၂၇-၁၁-၂၀၁၆ နံနက် မိမိကိုယ်ကို အောင်နိုင်ရေး အကြောင်းတရားဒေသနာတော်၊ မန္တလေးမြို့
စစ်ကိုင်းမြို့ ၊ ရတနာစေတီ ဆင်များရှင်စေတီတော်အတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသနာတော်နှစ် (၂၅၆၀) ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခု၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၁၃)ရက်၊
၂၇-၁၁-၂၀၁၆ စေတိယပူဇာ မြတ်မင်္ဂလာအကြောင်း တရားဒေသနာတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ ၈၄လမ်းနှင့် ၂၇လမ်းထောင့်၊ အဆင့်မြင့်ဈေးချိုတော်တွင် ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသနာတော်နှစ် (၂၅၆၀) ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခု၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၁၄)ရက်၊
၂၈-၁၁-၂၀၁၆ ရှင်မဟာကောထ္ထိကအား ဟောကြားအပ်သော ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရား
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ တံတားဦးမြို့နယ်၊ ဂိုဏ်းထောက်ကျောင်းတိုက်၊ သန္တိသုခဓမ္မာရုံအတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသနာတော်နှစ် (၂၅၆၀) ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခု၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၁၅)ရက်၊
၂၉-၁၁-၂၀၁၆ လူမှုကူညီ မြတ်ပါရမီ အကြောင်း တရားဒေသနာတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ဆယ့်နှစ်ကိုင်းကျေးရွာ၊ ရွာသစ်ကျောင်းတိုက်၊ B.Mဓမ္မဗိမာန်အတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသနာတော်နှစ် (၂၅၆၀) ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခု၊ နတ်တော်လဆန်း (၁)ရက်၊
၃၀-၁၁-၂၀၁၆ ပြည့်စုံသော ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်း အကြောင်း တရားဒေသနာတော်
မန္တလေးမြို့၊ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ မဟာဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမအတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသနာတော်နှစ် (၂၅၆၀) ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခု၊ နတ်တော်လဆန်း (၂)ရက်၊
၁-၁၂-၂၀၁၆ မြတ်ဗုဒ္ဓတို့၏အဆုံးအမ ပါတိမောက္ခုဒ္ဒေသကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အကြောင်း တရားဒေသနာတော်
မန္တလေးမြို့၊ ၂၄လမ်းနှင့်၈၂လမ်းထောင့်၊ ရွှေကျီးမြင့်ဘုရား၊ ရွှေကျီးနား ဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်း ဆင်ယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၊ သာသနာတော်နှစ် (၂၅၆၀) ပြည့်နှစ်၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခု၊ နတ်တော်လဆန်း (၃)ရက်၊
၂-၁၂-၂၀၁၆ မကျန်းမာသူများအတွက် အထူးနှလုံးသွင်းခြင်း တရားဒေသနာတော်
၁၂-၁၂-၂၀၁၆ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၁၅)
၁၄.၁၂.၂၀၁၆ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၁၆)
၂၁-၁၂-၂၀၁၆ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၁၈)
၂၂-၁၂-၂၀၁၆ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၁၉)
၂၃-၁၂-၂၀၁၆ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၂၀)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ရုံးကုန်းကျေးရွာ၊ဇောတိကာရာမ ရုံးကုန်းကျောင်းတိုက်။ စွယ်တော်မြတ်စေတီ၊ ထီးတော်တင်၊ ဗုဒ္ဓါဘိသေကမင်္ဂလာ၊ရှင်ပြု ဒုလ္လဘ ရဟန်းခံ၊ကျောင်းလွှတ်ပူဇာ အခမ်းအနား
၂၅-၁၂-၂၀၁၆ အနုမောဒနာ တရားတော်
၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရှင်ပြု နားသ အနုမောဒနာ သြဝါဒကထာ တရားဒေသနာတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့ တူမောင်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက်။
၂၆-၁၂-၂၁၀၆ စွမ်းအားကြီးမား ကုသိုလ်တရား တရားတော် (join2broken session)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့ သာသနဇောတာရုံ(ရွှေအုန်းပင်)ကျောင်းတိုက်။
၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ကိုးကွယ်အားထား မြတ်တရား တရားတော်
၂၈-၁၂-၂၀၁၆ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၂၁)
၃၀-၁၂-၂၀၁၆ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၂၂)
၄-၁-၂၀၁၇ အကြင်နာတရား ပညာစွမ်းအားဖြင့် လောကသားတို့ ကိုကယ်
မန္တလေးမြို့ ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ပေါင်းလဲတိုက်၊ မဟာအောင်မြေရွှေသာလျောင်း ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း။
၅-၁-၂၀၁၇ ဓမ္မမေးခွန်း နှင့် အဖြေများတရားတော်
၆-၁-၂၀၁၇ ကံတရား၏ တုံ့ပြန်မှုသဘာဝ တရားတော်
ကျောက်ဆည်မြို့ ၊ မင်းကုန်းမဟာ စာသင်တိုက်၊ ရတနာ ဦးတင်ရွှေ ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း၊
၇-၁-၂၀၁၇ နံနက်၊ အနုမောဒနာ သြဝါဒကထာ တရားတော်
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊တမ္ပဝတီ ငွေဇင်ရပ်၊ သီဟတိုက်သစ် ကျောင်းတိုက်အတွင်း။
၇-၁-၂၀၁၇ စိတ်သောကကို ဖယ်ရှားခြင်း တရားတော်
ကူမဲမြို့ ၊ ရွှေဘုံသာကျောင်းတိုက်၊ကေသီဦး ဓမ္မာရုံအတွင်း။
၈-၁-၂၀၁၇ နံနက်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ချမ်းသာလေးပါး အကြောင်း တရားတော်
၈-၁-၂၀၁၇ အိပ်ပျော်ခြင်း နှင့် နိုးကြားခြင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၄၂လမ်း-၇၈လမ်းထောင့်၊ ခင်စောမူကွေ့၊ Golden City Event Park အတွင်း၊
၉-၁-၂၀၁၇ ထာဝရ ကောင်းမှုဖြင့် လောကကို အကျိုးပြုသူ တရားတော် (join2broken session)
၁၀-၁-၂၀၁၇ ဘဒ္ဒါလိသုတ် ပို့ချချက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၆၈လမ်း-လမ်းထောင့်၊၃၁လမ်းနှင့်၃၂လမ်းကြား၊ မဟာဝိဇိတာရုံကျောင်းတိုက် သာသနဟိတကာရီ ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း၊
၁၀-၁-၂၀၁၇ လူ့ပြည်က တရားပွဲများ နှင့် နတ်များအကြောင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ချမ်းမြသာယာရပ်၊ မြဝတီသီလရှင်စာသင်တိုက်အတွင်း၊
၁၁-၁-၂၀၁၇ နံနက်၊ အနုမောဒနာ တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ရတနာဂီရိကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၁၁-၁-၂၀၁၇ ဝေလာမသုတ် အနှစ်ချုပ် တရားတော်
၁၂-၁-၂၀၁၇ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၂၃)
၂၃-၁-၂၀၁၇ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၂၆)
၂၅-၁-၂၀၁၇ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ဗြဟ္မယာနအကြောင်းတရားဒေသနာတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊မဟာသုဗောရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၂၇-၁-၂၀၁၇ နံနက်၊ အနုမောဒနာ တရားတော် (join2broken session)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ မဟာသုဗောရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၂၈-၁-၂၀၁၇ နံနက်၊ အနုမောဒနာ တရားတော်
မန္တလေးမြို့ ၊နန်းတော်ရှေ့ ၊ အတုမရှိတိုက်တောင်ပေါက်၊ ရွှေဘုံသာဓမ္မဗိမာန်အတွင်း၊
၂၈-၁-၂၀၁၇ သံသရာဘဝမှာ နှစ်ကြိမ်သာဆုံတွေ့ကြသူများ အကြောင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊မတ္တရာမြို့နယ် ၊ စကျင်ရွာ၊ မဟာသိမ်ရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၂၉-၁-၂၀၁၇ ပီတိအဖြစ်ရဆုံး ကုသိုလ်အကြောင်း တရားတော် (join2broken session)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ရွှေဟင်္သာကျောင်းတိုက်အတွင်။
၃၀-၁-၂၀၂၇ ဓမ္မကို တန်ဖိုးထားခြင်း တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ဇမ္ဗူသီရိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း။
၁-၂-၂၀၁၇ ပုဏ္ဏားအိုကြီးကို ကယ်တင်ခြင်း တရားတော်
၄-၂-၂၀၁၇ CAE ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၏ မေးခွန်းများပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်း အပိုင်း ၁
၅-၂-၂၀၁၇ CAE ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၏ မေးခွန်းများပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်း အပိုင်း ၂
၆-၂-၂၀၁၇ CAE ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၏ မေးခွန်းများပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်း အပိုင်း ၃
၇-၂-၂၀၁၇ CAE ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၏ မေးခွန်းများပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်း အပိုင်း ၄
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ဓမ္မဝိနယစင်တာ ဓမ္မာရုံကြီးအတွင်း။
၁၂-၂-၂၀၁၇ အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ညှာတာခြင်း တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မင်းကုန်းကျေးရွာအတွင်း။
၁၃-၂-၂၀၁၇ လူတို့၏ အခြေခံ ကိုယ်ကျင့်တရား တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်အတွင်း။
၁၅-၂-၂၀၁၇ သင်္ခါရဟူသမျှ မတည်မြဲခြင်း အကြောင်းရှိကြ၏ တရားတော်
၂၆-၂-၂၀၁၇ အနန္တဇိနစေတီတော် ရတနာအုတ်မြစ်တော်စီ အခမ်းအနား
၂၆-၂-၂၀၁၇ အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အဆုံးအမစကား အကြောင်းတရားဒေသနာတော်
၂၇-၂-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အခမ်းအနား - ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး
၂၈-၂-၂၀၁၇ အနုမောဒနာ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အာရှအလင်းရောင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်အတွင်း။
၁-၃-၂၀၁၇ ရခဲသောလူဘဝနှင့် ရယူရမည့်အနှစ်သာရ တရားတော်
၂-၃-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အထူးတရားပွဲ (join4broken session)
၄-၃-၂၀၁၇ ဘုံ(၇)ဆင့်ထီးတော်တင်မင်္ဂလာနှင့်မြို့မစကားလှဓမ္မဗိမာန်တော်ရေစက်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား၊ ကလေးမြို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ကလေးမြို့၊ စကားလှ ဓမ္မာရုံကျောင်းးတိုက်အတွင်း။
၄-၃-၂၀၁၇ ဝက္ကလိမထေရ်မြတ်၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မများ တရားတော်
၅-၃-၂၀၁၇ အလှူတော်မင်္ဂလာ ရေစက်ချ အခမ်းအနား
၆-၃-၂၀၁၇ ကံကြမ္မာနှင့်သံသရာအကြောင်း တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊တမူးမြို့၊ အားကစားကွင်းအတွင်း။
၇-၃-၂၀၁၇ အမျော်မြင်ရှိမှကြီးပွားနိုင်မည် တရားတော်
၉-၃-၂၀၁၇ အများကောင်းကျိုး သယ်ပိုးရွက်ဆောင်ခြင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊စဉ့်ကူးမြို့နယ် လက်ပန်လှရွာ လက်ပန်လှကျောင်းတိုက်အတွင်း။ (join3broken session)
၁၀-၃-၂၀၁၇ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်ထားအကြောင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊မတ္တရာမြို့နယ် ယက္ကန်းစင်တောင်ဒေသ သစ္စာနန္ဒ ဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုက်အတွင်း။
၁၁-၃-၂၀၁၇ မွေးနေ့ပွဲ၏ အနှစ်သာရအကြောင်း တရားတော်
၁၂-၃-၂၀၁၇ အရှူံးနှင့်အမြတ် တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ် ကံတောင်ကျေးရွာ အားကစားကွင်းအတွင်း။
၁၂-၃-၂၀၁၇ သက်တော် ၇၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အမှတ်တရ ဂုဏပူဇာ အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား
၁၅-၃-၂၀၁၇ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစေနိုင်သည့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တံတားဦးမြို့၊ အမှတ် (၃)ရပ်ကွက် သုခိတကမ္ဘောဇဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း။
၁၇-၃-၂၀၁၇ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှင့် အလှူတော်မင်္ဂလာ အကြောင်း တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ ပါရမီရပ် အလှူတော်မင်္ဂလာ မဏ္ဍပ်အတွင်း။
၁၇-၃-၂၀၁၇ နံနက်ခင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ရတနာပုံ ခန်းမအတွင်း၊
၁၈-၃-၂၀၁၇ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ရှင်းလင်းချက်များ အကြောင်းတရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ သီတဂူဝိပဿနာအကယ်ဒမီ ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း။ (join4broken session)
၁၉-၃-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ အမရပူရမြို့၊ဝိသုဒ္ဓါရုံရေဦးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်အတွင်း၊ (join2broken session)
၁၉-၃-၂၀၁၇ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ သာသနာ ရှည်ကြာတည်တံ့ရေးအကြောင်း တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မြစခန်းကျောင်းတိုက်အတွင်း။
၂၄-၃-၂၀၁၇ ကရုဏာကမ္ဘာ မြတ်ချမ်းသာအကြောင်း တရားတော်
နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏမြို့၊ စွန့်လွှတ်စွန့်စားသူတို့၏ ကွန်းခိုရာ ကရုဏာကမ္ဘာဘိုးဘွားရိပ်သာ အတွင်း။
၂၅-၃-၂၀၁၇ သဘိယသုတ်အနှစ်ချုပ် တရားတော်
၂၆-၃-၂၀၁၇ နံနက် အနုမောဒနာ တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက် မဟာသမယဓမ္မာရုံကြီးအတွင်း၊
၂၆-၃-၂၀၁၇ သဘိယသုတ်အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၂) တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့၊မန္တလာသီရိအားကစားကွင်းအတွင်း။ (join3broken session)
၂၇-၃-၂၀၁၇ သဘိယသုတ်အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၃) တရားတော်
၂၈-၃-၂၀၁၇ သဘိယသုတ်အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၄) တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊မင်္ဂလာမန္တလေး Square ဧရိယာ အတွင်း။ (join3broken session)
၁၁-၄-၂၀၁၇ သဘိယသုတ်အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၅) တရားတော်
၁၂-၄-၂၀၁၇ သဘိယသုတ်အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၆) တရားတော်
၁၃-၄-၂၀၁၇ သဘိယသုတ်အနှစ်ချုပ် အပိုင်း(၇) တရားတော်
၁၄-၄-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေး ရဟန်တော်များ အပိုင်း (၁) တရားတော်
၁၅-၄-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေး ရဟန်တော်များ အပိုင်း (၂) တရားတော်
၁၆-၄-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေး ရဟန်တော်များ အပိုင်း (၃) တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာအတွင်း။ (join2broken session)
၁၇-၄-၂၀၁၇ မြန်မာတို့၏ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုပါ တရားတော်
၁၈-၄-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ် အောင်ချမ်းသာရွာ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာကျောင်းတိုက် ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မာရုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်း၊
၁၈-၄-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေး ရဟန်းတော်များ အပိုင်း(၄) တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာအတွင်း။ (join3broken session)
၁၉-၄-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
(၆)နှစ်မြောက် ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ ကျောင်းတိုက်နေ့ အထိမ်းအမှတ်
၁၉-၄-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေး ရဟန်းတော်များ အပိုင်း(၅) တရားတော်
၂၀-၄-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေး ရဟန်းတော်များ အပိုင်း(၆) တရားတော်
၂၁-၄-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေး ရဟန်းတော်များ အပိုင်း(၇) တရားတော်
၆-၅-၂၀၁၇ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဆုံးမစကားများ တရားတော်
၇-၅-၂၀၁၇ လောကတ္ထစရိယသုတ္တန် တရားတော် (မဟာသူရိယာရာမဆရာတော်)
၈-၅-၂၀၁၇ ပညာရှိသူတော်ကောင်း တရားတော် (သစ္စာရွှေစည်ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ)
၈-၅-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
၉-၅-၂၀၁၇ မြတ်ဗုဒ္ဓသည်သာလျှင်တစ်ဆူတည်းသောဘုရား တရားတော်
၁၀-၅-၂၀၁၇ ကဆုန်လပြည့်နေ့ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အောင်ပွဲများ တရားတော်
၁၁-၅-၂၀၁၇ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဆုံးမစကားများ အပိုင်း(၂) တရားတော်
၁၂-၅-၂၀၁၇ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဆုံးမစကားများ အပိုင်း(၃) တရားတော်
၁၃-၅-၂၀၁၇ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဆုံးမစကားများ အပိုင်း(၄) တရားတော်
၁၄-၅-၂၀၁၇ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဆုံးမစကားများ အပိုင်း(၅) တရားတော်
၉-၆-၂၀၁၇ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက် ၅၉နှစ်ပြည့် ကျောင်းတိုက်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား
၁၀-၆-၂၀၁၇ မာရ်နတ်သို့ တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် မြဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမစကားများ အပိုင်း ၇ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့၊မိုးထားကျောင်းတိုက်အတွင်း။ (join2broken session)
၁၁-၆-၂၀၁၇ ပျောက်နိုင်ခဲသည့်စိတ်စွဲများ တရားတော်
၁၈-၆-၂၀၁၇ လူ့အရည်အချင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ၊ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာကျောင်းတိုက်အတွင်း
၂၃-၆-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
၂၄-၆-၂၁၀၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
၂၅-၆-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
၂၆-၆-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
၈-၇-၂၀၁၇ သစ္စာတရားနှင့် မေတ္တာစွမ်းအား အကြောင်း ဒေသနာတော်
စင်္ကာပူ၊ ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မိသားစု ၁၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်
၁၀-၇-၂၀၁၇ ဘဝသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ၊ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာကျောင်းတိုက်အတွင်။
၁၁-၇-၂၀၁၇ ဖန္ဒနဇာတ်နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ၊
၁၂-၇-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက် မဟာသမယဓမ္မာရုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်း၊
၁၂-၇-၂၀၁၇ ကာမသုတ်နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ တရားတော်
၁၃-၇-၂၀၁၇ အနုမောဒနာ တရားတော်
ဆရာအဖွား ဒေါ်ကဉ္စနာ ၏ သက်တော် (၉၀) ပြည့် နဝရတ်ရတုမွေးနေ့ အလှူတော်မင်္ဂလာ
၁၅-၇-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ သြဝါဒကထာ တရားတော်
IIA အဘိဓမ္မတက္ကသိုလ် မန္တလေး အဝေးသင်ဌာနခွဲ
၁၆-၇-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ တရားတော်
၁၆-၇-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အကြိမ်(၅၀) အနန္တဂုဏပူဇာ အခမ်းအနား
စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်၏ လွန်တော်မူ အနန္တကျေးဇူးရှင်များကို ပူဇော်ကန်တော့ခြင်းနှင့် အမျှတမ်းပေးဝေခြင်း အခမ်းအနား
၁၇-၇-၂၀၁၇ ထာဝရ မန္တလေးဖောင်ဒေးရှင်း သြဝါဒခံယူပွဲ နှင့် ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်ပွဲ အခမ်းအနား
၁၈-၇-၂၀၁၇ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာကျောင်းတိုက် ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မာရုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်း၊
၂၁-၇-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား
၂၆-၇-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား
၂၉-၇-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား
၂၉-၇-၂၀၁၇ ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောခြင်း တရားတော်
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာကျောင်းတိုက် ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မာရုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်း၊
၃၁-၇-၂၀၁၇ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုကြရာဝယ် တရားတော်
ကျောက်ဆည်မြို့၊ စတုပစ္စယာနုဂ္ဂဟ နေ့စဉ် အရုဏ်ဆွမ်းလောင်းအသင်း
၄-၈-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား
၅-၈-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား
၁၈-၈-၂၀၁၇ အသိတရားရှိသူနှင့်အသိတရားမရှိသူ တရားတော် (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၁၉-၈-၂၀၁၇ အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော် (Sedona Hotel Yangon)
၂၁-၈-၂၀၁၇ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ စီးပွားရေးဩဝါဒ တရားတော် (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၂-၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၃-၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၄-၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၅-၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၉-၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆) အမရပူရမြို့ (Join two video)
၃၀-၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇) (အမရပူရမြို့၊ ရေဦးဝိသုဒ္ဓါရုံကျောင်းတိုက်)(Join three video)
၃၁-၈-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈) (မလွန်ဈေးဆန်လှူအသင်းကြီး မန္တလေးမြို့) (Join two video)
၁-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉) (ဘုရားသုံးဆူ မန္တလေးမြို့)
၂၉-၈-၂၀၁၇ နံနက် အနုမောဒနာ
၄-၉-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း - ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၅-၉-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း - ပညာဝိမုတ္တိ သိမ်တော် ရေစက်ချ အခမ်းအနား (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၈-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၉-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၁) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၁၀-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၁၁-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၁၂-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၁၃-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၅) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၁၄-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၆) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၁၅-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၇) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၁၆-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၈) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၁၇-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၉) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၁၉-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၀) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၀-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၁) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၁-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၂) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၂-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၃) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၃-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၄) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၄-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၅) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၅-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၆) (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၆-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၇) (မန္တလေးမြို့ ဘုရားနီဘုရား နိုင်လွန်ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း၊ )
၂၇-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၈) (မန္တလေးမြို့ မဟာဝိဇိတာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း)
၂၈-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၂၉) (စစ်ကိုင်းမြို့ ထူပါရုံဘုရားအတွင်း)
၂၉-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၀) (စစ်ကိုင်းမြို့ ပိုးတန်းရပ် မြို့တော်ခန်းမအတွင်း) (Join two video)
၃၀-၉-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၁) (မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ရှင်ဘို့မယ်မြတ်စွာဘုရားအတွင်း)
၂၇-၉-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော် (မန္တလေးမြို့ အထွေထွေ ရောဂါကု ဆေးရုံကြီး အတွင်း)
၂၈-၉-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော် (မန္တလေးတက္ကသိုလ်အတွင်း)
၃၀-၉-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော် (အတွင်း)
၁-၁၀-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော် (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ) (join2video)
၂-၁၀-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော် (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၃-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၂)
(မန္တလေးမြို့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် မြဝတီသီလရှင်စာသင်တိုက်)
၄-၁၀-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
(မန္တလေးမြို့ မြို့တော်ဆေးရုံ ၈-လွှာ အဆောင်သစ်)
၄-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၃) တရားတော်
(မန္တလေးမြို့ လက်ပန်ရပ် ရွှေလက်ပံဓမ္မာရုံအတွင်း)
၅-၁၀-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
(မန္တလေးမြို့ လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဓမ္မဒီပ ဗုဒ္ဓစာပေသင်တန်းကျောင်း)
၅-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၄) တရားတော်
၁၀-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၈) တရားတော်
(မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် အိမ်တော်ရာဘုရား ဓမ္မာရုံ)
၁၂-၁၀-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း - ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာ အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ယက္ကန်းစင်တောင်ဒေသ သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာ ဓမ္မာရုံကျောင်းတော်ကြီး)
၁၃-၁၀-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း - ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာ အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့၊ သာသနဇောတာရုံ(ရွှေအုန်းပင်)ကျောင်းတိုက်)
၁၃-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၃၉) တရားတော် (join2video)
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့ ဘုရင်နောင်ခန်းမ)
၁၄-၁၀-၂၀၁၇ - သာသနာတော် မကွယ်ပမှီ ကြိုးစားကြ တရားတော်
(ကျိုင်းတုံမြို့ ယန်းလှရွာ ယာယီစံကျောင်း)
၁၈-၁၀-၂၀၁၇ - တရားရှိနေသမျှ ဘုရားရှိနေသည် တရားတော်
၂၁-၁၀-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
ဓမ္မဒါယာဒသိမ်တော် သီမာသမ္မုတိကံဆောင်မင်္ဂလာ - (ပြင်ဦးလွင်မြို့ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာကျောင်းတိုက်)
၂၁-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၀) တရားတော်
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ Y.M.B.A ခန်းမ)
၂၂-၁၀-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော် (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၄-၁၀၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော် (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၂၄-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၁) တရားတော်
(မန္တလေးမြို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပရိဝုဏ်)
၂၅-၁၀-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
(ပုသိမ်ကြီးမြို့ နှမ်းကြဲကျေးရွာ ဓမ္မရတနာ (ထာဝရ)၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ)
၂၅-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၂) တရားတော်
၂၆-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၃) တရားတော် (မန္တလေးမြို့ ဆင်တိုင်ဓမ္မာရုံ)
၂၇-၁၀-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
မဟာကထိန်တော် အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား- (စစ်ကိုင်းမြို့၊ မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်)
၂၇-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၄) တရားတော် (မန္တလေးမြို့)
၂၈-၁၀-၂၀၁၇ - မလေးရှားနိုင်ငံခြားသားများ မှ ပိဋိကတ် စာအုပ်အလှူတော် အခမ်းအနား
၂၈-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၅) တရားတော်
၂၉-၁၀-၂၀၁၇ နံနက် - အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်း တရားတော်
(မန္တလေးမြို့ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ရန်အောင်မြင်ခန်းမ)
၂၉-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၆) တရားတော်
၃၀-၁၀-၂၀၁၇ (join6video) မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၇) တရားတော် (ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်၊ ရန်ကုန်မြို့)
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
၃၁-၁၀-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၈) တရားတော်
(ဗဟိုလမ်းနှင့်သာယာဝတီလမ်းထောင့် စည်ပင်သာယာရဲဝင်းအတွင်း၊ ရန်ကုန်မြို့)
၃-၁၁-၂၀၁၇ နံနက် အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော် (join2video )
မဟာကထိန်တော် အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ် ငါးဆူတောင်ဒေသ ဓမ္မဝိနယစင်တာ)
၄-၁၁-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၄၉) တရားတော်
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ် ငါးဆူတောင်ဒေသ ဓမ္မဝိနယစင်တာ)
၈-၁၁-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၀) တရားတော်
(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပဲခူးမြို့၊ ကြခတ်ဝိုင်းကျောင်းတိုက်)
၁၇-၁၁-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၈-၁၁-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၃) တရားတော်
၂၆-၁၁-၂၀၁၇ နေ့လည် - ဩဝါဒ တရားတော်
ကျောင်းလွှတ်ပူဇာ အာစရိယပူဇာ သုတဗုဒ္ဓပူဇာအခမ်းအနား(စစ်ကိုင်းမြို့၊ သကျဓီတာသီလရှင်စာသင်တိုက်)
၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ အကြောင်း တရားတော် (join2video) (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဝိပဿနာမဟာဂန္ဓာရုံကမ္မဋ္ဌာန်းတိုက်)
၂၇-၁၁-၂၀၁၇ နံနက် - ဝိပဿနာမဟာဂန္ဓာရုံကမ္မဋ္ဌာန်းတိုက် ချောင်တည် နှစ်(၁၀၀)ပြည့် ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားတရားတော် (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဝိပဿနာမဟာဂန္ဓာရုံကမ္မဋ္ဌာန်းတိုက်)
၉-၁၂-၂၀၁၇ သံသရာဘဝ ရှည်ကြာရခြင်း အကြောင်း တရားတော် (join2video)
(ယန္တရားရိပ်သာ ၊ ဘောဂဗလအိမ်ယာဝင်း၊ မယ်လမုဘုရားအနီး)
၁၀-၁၂-၂၀၁၇ နံနက် - အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၁-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၄) တရားတော်
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်)
၁၂-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၅) တရားတော်
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်အတွင်း၊
၁၃-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၆) တရားတော်
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်)
၁၄-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၇) တရားတော်
၁၅-၁၂-၂၀၁၇ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၈) တရားတော် (join2video)
၁၆-၁၂-၂၀၁၇ နံနက် - အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် တရားတော်
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (၆)ရပ်ကွက်အမှတ်(၇)၊ဇေယျာခေမာလမ်း သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ)
၁၆-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၅၉) တရားတော်
၁၈-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၁) တရားတော်
၂၀-၁၂-၂၀၁၇ နံနက် - ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ပညာစွမ်းအား တရားတော်
၂၀-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၂) တရားတော်
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အမှတ်(၈)ရပ်ကွက် မေတ္တာစွမ်းအားကွန်ကရစ်လမ်းထိပ်)
၂၁-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၃) တရားတော်
၂၂-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၄) တရားတော် (join3video)
၂၃-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၅) တရားတော်
၂၄-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၆) တရားတော်
၂၆-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၇) တရားတော်
၂၇-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၈) တရားတော် (join2video)
၂၈-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၆၉) တရားတော်
၂၉-၁၂-၂၀၁၇ - ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့၏ အဆုံးအမဖြင့် ဘဝကိုပုံဖော်ခြင်း တရားတော်
၃၀-၁၂-၂၀၁၇ ပညာ ဥစ္စာ ကြိုးစားရှာ တရားတော် (join2video)
၃၁-၁၂-၂၀၁၇ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၀) တရားတော်
၁-၁-၂၀၁၈ နှစ်ဦးညချမ်းအခါသမယ နှစ်သစ်ကူး အထူးဓမ္မသဘင်
၂-၁-၂၀၁၈ - မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၁) တရားတော်
၄-၁-၂၀၁၈ - ဘဝအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ရေး တရားတော်
၅-၁-၂၀၁၈ - နေ့လည် အရိယာမဂ္ဂဒေသနာ (combine2video)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ဆရာတော်ကြီးမှ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒ တက္ကသိုလ် ဆရာ ရဟန်းတော်များနှင့် ဆရာ ဆရာမ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတို့အား
အရိယာမဂ္ဂဒေသနာ အမည်ဖြင့် Special Lecture ပို့ချချက်
၁၇-၁-၂၀၁၈ ၁၃၇၉-ခု တပို့တွဲလဆန်း(၁)ရက် မဟာသုဗောဓာရုံ သာသနဝံသသမုဋ္ဌာပက ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ (၉၃)နှစ်မြောက် ဝိဇာတရက်မြတ်အခါ ရဋ္ဌဂုရုပူဇာ သံဃဒါနမင်္ဂလာ
၂၂-၁-၂၀၁၈ - လောကအကျိုးပြု လုပ်ငန်းနှစ်ခု တရားတော်
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ် မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်မဟာစည်တောရရိပ်သာ)
၂၈-၁-၂၀၁၈ နံနက် - အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၃၀-၁-၂၀၁၈ နံနက် - အနုမောဒနာ တရားတော်
အနန္တဇိနစေတီတော် ထီးတော်တင်ပွဲ အခမ်းအနား (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ် ငါးဆူတောင်ဒေသ ဓမ္မဝိနယစင်တာ)
၃၀-၁-၂၀၁၈ - တိုးတက်ကြီးပွား အရည်အချင်းများ တရားတော်
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ် ဓမ္မဒူတ ဇေတဝန်တောရ ဆေကိန္ဒာရာမကျောင်း)
၃၁-၁-၂၀၁၈ - လူ့ဘဝနှင့်သူတော်ကောင်း တရားတော်
၁-၂-၂၀၁၈ - လှပသောဘဝကို မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဖြင့် ပုံဖော်ခြင်း တရားတော်
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ် တက္ကသိုလ်များ ဓမ္မာရုံ)
၄-၂-၂၀၁၈ - မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လွတ်မြောက်ရေး လမ်းစဉ် တရားတော်
(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် အမှတ်-၄၅ ရပ်ကွက် ဆည်မြောင်းလမ်းနှင့်စက်မှုလမ်းဒေါင့် အားကစားကွင်း)
၆-၂-၂၀၁၈ - ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း၏ အပြစ်များ တရားတော်
(စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုမြို့ ချမ်းသာကြီး၊ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး ပရိဝုဏ်)
၉-၂-၂၀၁၈ - စိတ်အခြေအနေနှင့် ရောက်ရမည့် ဘုံဘဝ တရားတော်
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ်ကူးမြို့နယ် ယက္ကန်းစင်တောင်ဒေသ သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာ)
၁၀-၂-၂၀၁၈ - ငါးဆူဗုဒ္ဓ ဘဒ္ဒဤကမ္ဘာ တရားတော်
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာ- စဉ်ကူး (၂)မြို့နယ် ယက္ကန်းစင်တောင်ဒေသ သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာ)
၁၁-၂-၂၀၁၈ - အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၁-၂-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အာဏာဒေသနာ တရားတော် (join2video)
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ရွှေဟင်္သာကျောင်းတိုက်)
၁၂-၂-၂၀၁၈ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အောင်ချမ်းသာရွာ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာကျောင်းတိုက်)
၁၃-၂-၂၀၁၈ ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များ၏ အကျိုးစီးပွား တရားတော်
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပင်မဆောင်ရှေ့)
၁၄-၂-၂၀၁၈ နံနက် - အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့ ၂၈-လမ်း ၇၁၇၂ကြား အောင်သုခခြံနေအိမ်)
၁၄-၂-၂၀၁၈ - ဗုဒ္ဓဘာသာ အမြတ်ရတနာ တရားတော်
(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့ ၈၂-လမ်း၊၂၁၂၂လမ်းကြား နိုင်လွန်ဓမ္မဗိမာန် ဘုရားနီဘုရားဝင်း)
၁၅-၂-၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ရတနာများ တရားတော် (ရွှေတိဂုံစေတီတော် ရင်ပြင်)
၁၆-၂-၂၀၁၈ အဆိုးထဲမှာ အကောင်းရှာ တရားတော်
၁၉-၂-၂၀၁၈ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ကျန်းမာရေး တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၂ အတွင်း၊
၂၀-၂-၂၀၁၈ ကံကောင်းချင်လျှင် စိတ်ထားပြင် တရားတော်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတနော်မြို့၊ သာသနာ့ဟိတာရာမပုခမ်းကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၂၁-၂-၂၀၁၈ စေတိယပူဇာ မြတ်မင်္ဂလာ တရားတော်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျောင်းကုန်းမြို့၊ ဒက္ခိဏာရာမရွှေကျင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်အတွင်း၊
၂၂-၂-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၂-၂-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် မြတ်သောအလှူမင်္ဂလာ တရားတော်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့၊ ရွှေကျောင်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက် အတွင်း၊
၂၃-၂-၂၀၁၈ သတိသမ္ပဇဉ်ည နှင့် နေ့စဉ်ဘဝ တရားတော်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျုံပျော်မြို့ မြတ်ချမ်းသာဘုရားကြီး အတွင်း၊
၁-၃-၂၀၁၈ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ (၇၈)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အနုမောဒနာ တရားတော်
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ (၇၈)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပူဇာ အလှူတော်မှတ်တမ်း
၁၇-၃-၂၀၁၈ နံက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အောင်ချမ်းသာရွာ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၁၇-၃-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၂) တရားတော်
၁၈-၃-၂၀၁၈ ရတနာကို ရှာဖွေခြင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် မိုးကုတ်မြို့၊ ဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရား မဏိရတနာခန်းမ အတွင်း၊
၁၉-၃-၂၀၁၈ ရတနာကို ရှာဖွေခြင်း အပိုင်း(၂) တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် မိုးကုတ်မြို့၊ ကျပ်ပြင်ပန်းမလယ်ပြင်ကျောင်း အတွင်း၊
၂၄-၃-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၄-၃-၂၀၁၈ ဆင်းရဲသူနှင့်ချမ်းသာသူ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလာသီရိအားကစားကွင်း အတွင်း၊
၂၅-၃-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရန်ကင်းတောင်၊ဥယျာဉ်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်အတွင်း၊
၂၅-၃-၂၀၁၈ မေးခွန်းပုစ္ဆာဖြင့် အဖြေရှာခြင်း တရားတော်
၂၈-၃-၂၀၁၈ ဘဝကိုအနိုင်ယူခြင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ပရဟိတမျက်မမြင် ပညာသင်ကျောင်းအတွင်း၊
၂၉-၃-၂၀၁၈ ပရဟိတစွမ်းအားနဲ့ ပါရမီဆယ်ပါး တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ပရဟိတမျက်မမြင် ပညာသင်ကျောင်းအတွင
၃၁-၃-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း (၇၃) တရားတော်
၃-၄-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၃၈လမ်း၊ ၈၄-၈၅လမ်းကြား အတွင်း၊
၅-၄-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၈-၄-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၈-၄-၂၀၁၈ မဟာဇနကဇာတ်တော်နှင့် ဘဝသင်ခန်းစာများ တရားတော်
၉-၄-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၉-၄-၂၀၁၈ မဟာဇနကဇာတ်တော်နှင့် ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၂) တရားတော်
၁၀-၄-၂၀၁၈ မဟာဇနကဇာတ်တော်နှင့် ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃) တရားတော်
၁၁-၄-၂၀၁၈ မဟာဇနကဇာတ်တော်နှင့် ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄) တရားတော်
၁၂-၄-၂၀၁၈ မဟာဇနကဇာတ်တော်နှင့် ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅) တရားတော်
၁၃-၄-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၁၃-၄-၂၀၁၈ သုတသောမနှင့် လူဘီလူး တရားတော် (၁)
နှစ်သစ်ကူး အထူးဓမ္မသဘင်၊သြင်္ကန်အကြိုနေ့ ညချမ်းအခါသမယ
၁၄-၄-၂၀၁၈ သုတသောမနှင့် လူဘီလူး တရားတော် (၂)
၁၅-၄-၂၀၁၈ သုတသောမနှင့် လူဘီလူး တရားတော် (၃)
၁၆-၄-၂၀၁၈ သုတသောမနှင့် လူဘီလူး တရားတော် (၄)
၁၇-၄-၂၀၁၈ သုတသောမနှင့် လူဘီလူး တရားတော် (၅)
၁၈-၄-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၂၀-၄-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၁-၄-၂၀၁၈ ကုသိုလ်တရားနှင့်စိတ်စွမ်းအား တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ မြို့တော်ခန်းမအတွင်း၊
၂၂-၄-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ပို့ချချက်
၂၃-၄-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၂၃-၄-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း (၇၄) တရားတော်
၂၄-၄-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၂၄-၄-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၅-၄-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၂၅-၄-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း (၇၅) တရားတော်
၂၆-၄-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၂၆-၄-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ တရားတော်
၂၇-၄-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၂၇-၄-၂၀၁၈ လူငယ် လူကြီး တရားတော်
၂၈-၄-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၂၈-၄-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီဘဝမှ သုဝဏ္ဏသာမ တရားတော်
၂၉-၄-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီဘဝမှ သုဝဏ္ဏသာမ အပိုင်း(၂) တရားတော်
၃၀-၄-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၃၀-၄-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီဘဝမှ မဃဒေဝမင်းနှင့်နေမိမင်း အပိုင်း(၁) တရားတော်
၁-၅-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၁-၅-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီဘဝမှ မဃဒေဝမင်းနှင့်နေမိမင်း အပိုင်း(၂) တရားတော်
၂-၅-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၃-၅-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၃-၅-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီဘဝမှ မဃဒေဝမင်းနှင့်နေမိမင်း အပိုင်း(၃) တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အောင်ချမ်းသာရွာ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာကျောင်းတိုက်အတွင်း
၄-၅-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၅-၅-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၅-၅-၂၀၁၈ ဝိပဿနာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် တောင်စလင်းကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၆-၅-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၆-၅-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီဘဝမှ မဃဒေဝမင်းနှင့်နေမိမင်း အပိုင်း(၄) တရားတော်
၇-၅-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၇-၅-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဒွယ ဝိပဿနာ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အမတသုခသမ္ဗုဒ္ဓေကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကပ်ကျော်ဆုတောင်းပြည့် စေတီတော်အတွင်း၊
၈-၅-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၉-၅-၂၀၁၈ ပါရာဇိကကဏ္ဍ အဋ္ဌကထာ ဗာဟိရနိဒါနကထာ ပို့ချချက်
၁၂-၅-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီဘဝမှ မဃဒေဝမင်းနှင့်နေမိမင်း အပိုင်း(၅) တရားတော်
၁၅-၅-၂၀၁၈ သူတော်ကောင်းတို့ မြတ်နိုးသောဆု တရားတော်
၁၇-၅-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၁၇-၅-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မအသံ တရားတော်
၂၂-၅-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၇-၅-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၇-၅-၂၀၁၈ တဏှာဆင့်ပွား အဆိုးတရားများ တရားတော်
၂၈-၅-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၂၈-၅-၂၀၁၈ မဟာသုဗောဓာရုံ နှစ် ၆၀ ပြည့် ပူဇော်ပွဲ
၂၈-၅-၂၀၁၈ အမြင်ကွဲပြား ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ထူးခြားသောဘဝ တရားတော်
၂၉-၅-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ သြဝါဒကထာ တရားတော်
29.5.2018 ဓမ္မသဘင် LIVE အစီအစဉ်
၂၉-၅-၂၀၁၈ ရှင်ဥပါလိမထေရ်မြတ်၏ အသိပေးဆုံးမစကား တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ပြည်ကြီးရန်လုံရပ်၊ မဟာကုသိုလ်တော်ကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၃၀-၅-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
မန္တလေးမြို့ ကိုဇာနည်ကြည်ဝင်း နေအိမ်အတွင်း၊
၃၀-၅-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့်အညီ အားကိုးရာရှာခြင်း တရားတော်
မန္တလေးမြို့ မဟာဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်အတွင်း၊
၃၀-၅-၂၀၁၈ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ၏ ၂၀၁၈-ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့ ကျောင်းသားသစ်များ ကြိုဆိုအခမ်းအနား Fresher Welcome
၁-၆-၂၀၁၈ သတိထားရမည့် မမှန်မကန်ပြောဆိုမှုများ တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်အတွင်း၊
၂-၆-၂၀၁၈ ဘဝမှာ နေထိုင်သမျှ အရေးပါသည့် ကိုယ်ကျင့်တရား နှစ်ပါး တရားတော်
သာသနပူဇာ မြတ်မင်္ဂလာ တရားအလှူတော် အထူးဓမ္မသဘင်...
၃-၆-၂၀၁၈ မိတ်ဆွေစစ်ကို ရှာဖွေခြင်း တရားတော်
၆-၆-၂၀၁၈ခစရဏတရားဖြင့် အောင်မြင်မှုကိုရယူကြ တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Novotel Yangon Max Hotel အတွင်း၊
..သာသနပူဇာ မြတ်မင်္ဂလာ တရားအလှူတော် အထူးဓမ္မသဘင်...
၇-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၆) တရားတော်
၈-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၇)တရားတော်
၉-၆-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အတွင်း၊
၉-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၈) တရားတော်
၁၀-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၇၉) တရားတော်
၁၁-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၀) တရားတော်
၁၂-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၁) တရားတော်
၁၃-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၂) တရားတော်
၁၄-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၃) တရားတော်
၁၅-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၄) တရားတော်
၁၆-၆-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ငါးဆူတောင်ဒေသ ဓမ္မဝိနယစင်တာ အတွင်း၊
၁၆-၆-၂၀၁၈ နေ့လည်ခင်း ဩဝါဒ စကား တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ တက္ကသိုလ်ဓမ္မာရုံ အတွင်း၊
၁၇-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၅) တရားတော်
၁၉-၆-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း UMFCCI အတွင်း၊
၂၀-၆-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၂-၆-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၄-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၆) တရားတော်
၂၅-၆-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၇) တရားတော်
၂၆-၆-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၇-၆-၂၀၁၇ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၈-၆-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အညီ နေထိုင်ခြင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် မဟာဓမ္မိကာရာမရွှေကျင်တိုက်မအတွင်း၊
၂၈-၆-၂၀၁၈ လောကကိုလှန်၍ဆန်တက်သူ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်အတွင်း၊
၃၀-၆-၂၀၁၈ ဓမ္မဒိန္နသုတ်မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဆုံးမစကား တရားတော်
၁-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၁-၇-၂၀၁၈ ဘာသာတရားနှင့် အမှန်အမှား တရားတော်
၂-၇-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၃-၇-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သမ္မုတိဒေသနာ နှင့် ပရမတ္ထဒေသနာ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊အောင်မြေသာစံ မြို့နယ် နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်အတွင်း၊
၄-၇-၂၀၁၈ ဩဝါဒကထာ တရားတော်
၄-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မန္တလေးတက္ကသိုလ်အတွင်း၊
၅-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၇-၇-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၈) တရားတော်
၈-၇-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၈၉) တရားတော်
၉-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၁၀-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၁၁-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၁၂-၇-၂၀၁၈ ညနေခင်းပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၁၄-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၁၄-၇-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၀) တရားတော်
၂၁-၇-၂၀၁၈ ဝိသာခါဆန္ဒပြည့်ဝသောအခါ တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်
၂၄-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၆-၇-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် မိသားစုဘဝ တရားတော်
၂၇-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၇-၇-၂၀၁၈ ၂၆၀၇နှစ်ပြည့် ဓမ္မစကြာနေ့ တရားတော်
၂၈-၇-၂၀၁၈ ဝါဆို ဝါကပ် အခမ်းအနား
၂၈-၇-၂၀၁၈ ဝါဆိုပွဲ သြဝါဒ တရားတော်
၂၈-၇-၂၀၁၈ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတို့၏ အရည်အချင်းကောင်းများ တရားတော်
၂၉-၇-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ နှစ်ဘဝချမ်းသာရေး တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၈၅-လမ်း ၃၄-၃၅ကြား ပရိယတ္တိသာသနဟိတ ဗိမာန်တော်အတွင်း
၃၀-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မဟာသုဗောရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၃၁-၇-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၁-၈-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၃-၈-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၃-၈-၂၀၁၈ ဝါတွင်းဥပုသ်ကာလ အဖိတ်နေ့ သြဝါဒ
ဓမ္မဝိဇယသဘာ ဓမ္မာရုံကျောင်းတော် ရေစက်ချမင်္ဂလာ
၄-၈-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
မန္တလေးမြို့ မြင့်မြင့်ခင်ထိုးမုန့် မိသားစု
၅-၈-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၅-၈-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း စာဝါပို့ချမှု
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အတွင်း၊
၅-၈-၂၀၁၈ သစ်တစ်ပင်ကောင်း လူကောင်းတယောက် တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာအတွင်း၊
၆-၈-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း ဩဝါဒ တရားတော်
၇-၈-၂၀၁၈ နံနက်ပိုင်း အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၈-၈-၂၀၁၈ ချီးမွမ်းထိုက်သော လူသား တရားတော်
၁၀-၈-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့နယ် ယက္ကန်းစင်တောင်ဒေသ သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၁၂-၈-၂၀၁၈ ဘဝချမ်းသာရကြောင်းရှာ တရားတော်
၁၈-၈-၂၀၁၈ ဘဝအခြေအနေ၏ အဆင်မပြေမှုများ တရားတော်
၁၉-၈-၂၀၁၈ အချိန်ဖြုန်းခြင်း နှင့် အချိန်သုံးခြင်း တရားတော်
၂၁-၈-၂၀၁၈ အမုန်းသံသရာအကြောင်း တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့နယ် ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက် ကျော်အောင်စံထားကျောင်းတိုက်အတွင်း၊
၂၃-၈-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၁)
၂၄-၈-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၂)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ရပ်ကွက်ကြီး(၁၇) အောင်သုခလမ်း ဇိဏ္ဏဝုဒ္ဓဆာယာ ဘိုးဘွားရိပ်သာဓမ္မာရုံအတွင်း၊
၂၅-၈-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၃)
၂၇-၈-၂၀၁၈ အနုမောဒနာဩဝါဒ တရားတော်
၂၈-၈-၂၀၁၈ အနုမောဒနာဩဝါဒ တရားတော်
၂၈-၈-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၄) တရားတော်
၁-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၅) တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အောင်ချမ်းသာရွာ ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာကျောင်းတိုက်အတွင်း။
၂-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၆) တရားတော်
၃-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၇) တရားတော်
၄-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၈) တရားတော်
၅-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၉) တရားတော်
၇-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၀) တရားတော်
၉-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၁) တရားတော်
၁၁-၉-၂၀၁၈ အနုမောဒနာဩဝါဒ တရားတော်
၁၂-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၂) တရားတော်
၁၃-၉-၂၀၁၈ နှိုးဆော်သူနှင့် လှူဒါန်းသူ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ Y.M.B.A.ခန်းမအတွင်း
၁၅-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၃) တရားတော်
၁၆-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၄) တရားတော်
၁၉-၉-၂၀၁၈ ဒါနပုံရိပ် ယုန်တံဆိပ် တရားတော်
မန္တလေးမြို့ မလွန်ဈေးဆန်လှူအသင်းကြီး ဓမ္မမဏ္ဍပ်အတွင်း။
၂၀-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၇) တရားတော်
၂၁-၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၈) တရားတော်
၁-၁၀-၂၀၁၈ အနုမောဒနာဩဝါဒ တရားတော်
၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ပမာဒ နှင့် အပ္ပမာဒ တရားတော်
၁၃-၁၀-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၀၉) တရားတော်
၁၄-၁၀-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၅-၁၀-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ဒေဝဒဟသုတ် အနှစ်ချုပ် တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့ သဒ္ဓမ္မဇောတကသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း။
၁၉-၁၀-၂၀၁၈ သမာဓိဘာဝနာနှင့်ဝိပဿနာ တရားတော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောင်းဦးမြို့နယ် ခင်မွန်ရွာ စိန်ကြည်အရိယာဝါသဓမ္မာရုံအတွင်း။
၂၀-၁၀-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၁၀) တရားတော်
၂၁-၁၀-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၁-၁၀-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၁၁) တရားတော်
၂၂-၁၀-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၁၂) တရားတော်
၂၃-၁၀-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၂၃-၁၀-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကြိုဆိုပူဇော်ခြင်း တရားတော်
၂၄-၁၀-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၂၄-၁၀-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓပါဝင်တက်ရောက်သည့် ပဝါရဏာပွဲ တရားတော်
၂၅-၁၀-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၄-၁၁-၂၀၁၈ မြတ်ဗုဒ္ဓ အလိုကျ ပြည့်စုံသော လူ့ဘဝ တရားဒေသနာတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဇမ္ဗူ သီရိဗိမာန်
၆-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၁၃) တရားတော်
၇-၁၁-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ ဩဝါဒ တရားတော်
၈-၁၁-၂၀၁၈ ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့နယ် ယက္ကန်းစင်တောင်ဒေသ၊ သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုက်အတွင်း
၉-၁၁-၂၀၁၈ ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၀-၁၁-၂၀၁၈ ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၁-၁၁-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၁-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၁၄) တရားတော်
ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နောင်ခမ်းကြီးတောင်ခြေ၊ ဝါဆိုမီသာသနဗိမာန်တော်အတွင်း
၁၂-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၁၅) တရားတော်
ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ဓမ္မဝိဟာရကျောင်းတိုက်အတွင်း
၁၃-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၁၆) တရားတော်
မန္တလေးမြို့၊ ကန်ပတ်လမ်း၊ ဒေးဝန်းအနောက်ရပ်ကွက်၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်အတွင်း
၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၄-၁၁-၂၀၁၈ သြဝါဒ တရားတော်
၁၅-၁၁-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၅-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၁၇) တရားတော်
မန္တလေးမြို့၊ မဟာမုနိဘုရားကြီး၊ နာရီစင်နှင့်ဗုဒ္ဓဝင်ပြတိုက်လမ်း ဓမ္မမဏ္ဍပ်အတွင်း
၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ဘုရားပုထိုးမြတ်နိုးသဒ္ဓါ တရားတော်
၁၇-၁၁-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၇-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၁၈) တရားတော်
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ငါ့တရော်ကျေးရွာ၊ ဇဝနာရာမကျောင်းတိုက်အတွင်း
၁၉-၁၁-၂၀၁၈ လှည်းကူးမြို့နယ် ငါးဆူတောင်ဒေသ ဓမ္မဝိနယစင်တာ တတိယအကြိမ် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်
၂၀-၁၁-၂၀၁၈ လူသားများ၏ တူညီခြင်း နှင့် မတူညီကွဲပြားခြင်း တရားတော်
၂၁-၁၁-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၂၁-၁၁-၂၀၁၈ လူသားများ၏ မြင့်မြတ်ခြင်း နှင့် ယုတ်နိမ့်ခြင်း တရားတော်
၂၃-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း (၁၁၉) တရားတော်
၂၄-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း (၁၂ ဝ) တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဇမ္ဗူ သီရိဗိမာန်တော်အတွင်း
၂၅-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း (၁၂ ၁) တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မေခအိမ်ယာဝန်း
၂၆-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၂၂) တရားတော်
တံတားဦးမြို့နယ်၊ စကားအင်းကျေးရွာ၊ အောင်သိဒ္ဓိဓမ္မသာလာဓမ္မာရုံအတွင်း
၂၇-၁၁-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၂၇-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၂၃) တရားတော်
၂၈-၁၁-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၂၈-၁၁-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၂၄) တရားတော်
၂၉-၁၁-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၂၉-၁၁-၂၀၁၈ နည်းလမ်းငါးသွယ်ဖြင့် ပညာကိုမြှင့်တင်ခြင်း တရားတော်
၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ဘဝခရီးဝယ် လမ်းနှစ်သွယ် တရားတော်
၄-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ တရားတော်
၅-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂) တရားတော်
၆-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃) တရားတော်
၇-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၄) တရားတော်
၈-၁၂-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၈-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၅) တရားတော်
၉-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၆) တရားတော်
၁၀-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၇) တရားတော်
အမရပူရမြို့၊တမ္ပဝတီ ထီတန်းရပ်ဓမ္မာရုံ အတွင်း
၁၁-၁၂-၂၁၀၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၈) တရားတော်
၁၂-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၉) တရားတော်
၁၃-၁၂-၂၀၁၈ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၃-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၀) တရားတော်
၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၁) တရားတော်
၁၆-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၂) တရားတော်
၁၇-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၃) တရားတော်
၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၄) တရားတော်
၁၉-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၅) တရားတော်
၂၀-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၆) တရားတော်
၂၂-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၇) တရားတော်
၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၉) တရားတော်
၂၅-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၀) တရားတော်
၂၆-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၁) တရားတော်
၂၇-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၂) တရားတော်
၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၃) တရားတော်
၂၉-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၄) တရားတော်
၃၀-၁၂-၂၀၁၈ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၅) တရားတော်
၃၁-၁၂-၂၀၁၈ မိလိန္ဒမင်းနှင့် ရှင်နာဂသေတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အခြေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း(၂၇) တရားတော်
၁-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ SSC ဆေးရုံအတွင်း
၁-၁-၂၀၁၉ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၆) တရားတော်
၂-၁-၂၀၁၉ သတိသမ္ပဇဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့် ရင်ထဲမှအမုန်းတရား ဖယ်ရှားခြင်းတရားတော်
ကျေးဇူးတော်ရှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံ (Ph.D) အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ (သ.စ.အ)ဓမ္မာစရိယ ပါဠိပါရဂူ
သတိသမ္ပဇညဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့် ရင်ထဲမှအမုန်းတရား ဖယ်ရှားခြင်းတရားတော်
နေ့စွဲ- ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ်လ ( ၂)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
အချိန် - ၇:၃၀ ရန်ကုန်အချိန်
၃-၁-၂၀၁၉ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အလှည့်ကျလုပ်ငန်းများ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လှည်းတန်းလမ်းမ၊ စန္ဓာမြိုင်ကွန်ဒိုအတွင်း
၄-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၄-၁-၂၀၁၉ အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးရန် နည်းလမ်းလေးသွယ် တရားတော်
၅-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၂၅) တရားတော်
၆-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများအပိုင်း(၁၂၆) တရားတော်
၉-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၂၈) တရားတော်
၁၁-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၂-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၁) တရားတော်
၁၄-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၃) တရားတော်
16.1.2019 ဓမ္မသဘင် LIVE အစီအစဉ်
၁၆-၁-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၃၄) တရားတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ 615/2 နေအိမ်အတွင်း။
၁၈-၁-၂၀၁၉ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၇) တရားတော်
၂၁-၁-၂၀၁၉ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၈) တရားတော်
၂၂-၁-၂၀၁၉ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၉) တရားတော်
၂၃-၁-၂၀၁၉ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၀) တရားတော်
၂၄-၁-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၂၄-၁-၂၀၁၉ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၁) တရားတော်
၂၅-၁-၂၁၀၉ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၂) တရားတော်
၃-၂-၂၀၁၉ ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၃) တရားတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့၊ ဘုံပျံတောရ သံဝေဇနိယမိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာအတွင်း။
၈-၂-၂၀၁၉ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၁၄၃) တရားတော်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးမြို့၊ပဏ္ဍိတာရာမ ဆယ်မိုင်ကုန်း တောစခန်းရိပ်သာအတွင်း။
၁၃-၄-၂၀၁၉ နံနက်ပိုင်း သြင်္ကန် အကြိုနေ့ သီလပေး ဩဝါဒ တရားတော်
၁၃-၄-၂၀၁၉ သြင်္ကန် အကြိုနေ့ သီလပေး ဩဝါဒ တရားတော်
၆-၅-၂၀၁၉ နံနက် အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၄-၅-၂၀၁၉ နဝမအကြိမ် မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသော (၂၆၄၂)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အကြိုဓမ္မသဘင်
၁၄-၅-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၈)
၁၆-၅-၂၀၁၉ အားကိုးရာလား ရန်သူလား
၁၇-၅-၂၀၁၉ နဝမအကြိမ် မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသော (၂၆၄၂)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အကြိုဓမ္မသဘင်
၁၇-၅-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၈)
ပရိယတ္တိသာသနမဉ္ဇရီ သုံးထပ်ကျောင်းဆောင် ရေစက်ချ အလှူတော်မင်္ဂလာ
၁၈-၅-၂၀၁၉ နဝမအကြိမ် မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသော (၂၆၄၂)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဓမ္မသဘင်
၂၀-၅-၂၀၁၉ မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၁)
- end of facebook video session -